လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်များအတွက်အသစ်အဆန်း၊ အေးဆေးတည်ငြိမ်မှုနှင့်ဂရုပြုမှုကိုဘက်လိုက်မှု (၂၀၁၅) - သင့် ဦး နှောက်တွင်အပေါက်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ် (2015) မှအသစ်အဆန်း, အေးစက်နှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု
မှတ်ချက်များ - ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ရဲ့ ဦး နှောက်လေ့လာမှု။ ဘာသာရပ်များကိုညစ်ညမ်းသောစွဲသူများအားအသေအချာစစ်ဆေးသည်။ ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သူတို့သည်လိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်များကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာလေ့ကျင့်ကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့၏ ဦး နှောက်သည်တူညီသောပုံရိပ်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုအားစိုက်လာသည်။ ထို့ကြောင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှု၏အသစ်အဆန်းကစွဲလမ်းမှုကိုအားဖြည့်ပေးပြီးပိုမိုမြန်ဆန်သောအလေ့အကျင့်ကိုကျော်လွှားရန်ပိုမိုအသစ်သောလိုအပ်သည့်စက်ဝိုင်းပုံသဏ္creatingာန်ကိုဖန်တီးသည်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းသောစွဲသူများအတွက်အသစ်အဆန်းကိုလိုချင်သည်မှာယခင်ကမရှိခဲ့ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ 'ကြက်' သည်ညစ်ညမ်းသောအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပြီး 'ဥ' သည်အသစ်အဆန်းရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်။ နိုဝင်ဘာလ 23, 2015
အပြည့်အဝလေ့လာမှု Link ကို
အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုပြသသောလူ - လိင်စွဲလမ်း - ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကဦးဆောင်အသစ်သောသုတေသနအရသိရသည်၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထက်အသစ်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေပိုမိုရှာဖွေမောင်းနှင်နေကြသည်။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်အလားအလာသစ်ကိုရုပ်တုဆင်းတုတစ်ခုနီးပါးအဆုံးမဲ့အရင်းအမြစ်ထောက်ပံ့ပေးသောအွန်လိုင်း porn ၏အခြေအနေတွင်အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်သည်။
အဆိုပါထုတ်ဝေလေ့လာမှုတစ်ခုမှာတော့ စိတ်ရောဂါသုတေသနဂျာနယ်သုတေသီများကလည်းလိင်စွဲသူများသည်သဘာဝရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်နွယ်သည့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များနှင့်ပိုမိုထိတွေ့နိုင်သည်ဟုဆိုသည်။
လိင်စွဲလမ်းမှုသည်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေးများ၊ ခံစားချက်များနှင့်အပြုအမူများကိုထိန်းချုပ်ရန်အခက်အခဲရှိလျှင်အရွယ်ရောက်သူ ၂၅ ယောက်လျှင် ၁ ယောက်အထိများသောအားဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်သည်။ ၎င်းသည်အပြင်းအထန်ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခံရပြီးလူတစ် ဦး ၏မိသားစုနှင့်လူမှုရေးဘ ၀ နှင့်သူတို့၏လုပ်ငန်းအပေါ်တွင်လည်းအရှက်တကွဲအကျိုးနည်းစေနိုင်သည်။ ရောဂါရှာဖွေရေးအတွက်ကူညီရန်တရားဝင်သတ်မှတ်ချက်မရှိပါ။
ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ်မှစိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဦးစီးဌာနမှဒေါက်တာ Valerie Voon ကဦးဆောင်ယခင်အလုပ်များတွင်သိပ္ပံပညာရှင်များသုံးဦးနှောက်ဒေသများကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်လိင်စွဲပိုမိုတက်ကြွကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည်။ သိသိသာသာဤဒေသများ - ထို ventral striatum, dorsal anterior cingulate နှင့် amygdala - မူးယစ်ဆေးလှုံ့ဆော်မှုပြသသည့်အခါတွင်လည်းမူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် activated ဖြစ်ကြောင်းဒေသများဖြစ်ကြသည်။
Wellcome Trust မှရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားသောလေ့လာမှုအသစ်တွင်ဒေါက်တာ Voon နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်လိင်စွဲလမ်းသူ ၂၂ ဦး နှင့်အလုပ်များနေသော 'ကျန်းမာသောအမျိုးသားစေတနာ့ဝန်ထမ်း ၄၀ တို့၏အပြုအမူကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်တစ် ဦး ချင်းအားအဝတ်အချည်းစည်းရှိသောအမျိုးသမီးများ၊ ထို့နောက်၎င်းတို့သည်အကျွမ်းတဝင်နှင့်ပုံရိပ်အသစ်များအပါအ ၀ င်နောက်ထပ်ပုံတူအတွဲများကိုပြသပြီး '£ 22 win' ရန်ပုံရိပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများသည်အလေးသာမှုများကိုသတိမထားမိသော်လည်းပုံတစ်ပုံလုံးအတွက်အနိုင်ရခြင်းသည် ၅၀% ရှိသည်။
ဒေါက်တာ Voon က“ ငါတို့အားလုံးသည်အွန်လိုင်းမှအသစ်သောလှုံ့ဆော်မှုများကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ဆက်စပ်နိုင်သည် - ၎င်းသည်သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ကူးပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ် Facebook မှ Amazon သို့ YouTube သို့ကူးပြောင်းခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်” ဟုဒေါက်တာ Voon ကရှင်းပြသည်။ လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူအားပြသသောသူများအတွက်မူ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုသာအာရုံစိုက်သောသူတို့၏ထိန်းချုပ်မှုမှအပအခြားအမူအကျင့်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။
ဒုတိယတာဝန်တစ်ခုအနေဖြင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအားပုံသဏ္pairsာန်အမျိုးမျိုးကိုပြသသည် - မသန်မစွမ်းသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ကြားနေမီးခိုးရောင်သေတ္တာ - နှစ်ခုလုံးသည်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။ သူတို့ကဒီစိတ္တဇရုပ်ပုံများကိုပုံများနှင့်ဆက်စပ်ရန်သင်ယူခဲ့ကြပြီး၊ Pavlov ၏ကျော်ကြားသောစမ်းသပ်မှုမှခွေးများသည်မြည်ခေါင်းလောင်းကိုအစာနှင့်ဆက်စပ်ပုံကိုဆင်တူသည်။ ထို့နောက်၎င်းတို့ကိုထိုစိတ္တဇရုပ်ပုံများနှင့်စိတ္တဇရုပ်ပုံအသစ်တစ်ခုအကြားရွေးချယ်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ဤအချိန်တွင်သုတေသီများအနေဖြင့်လိင်စွဲလမ်းသူများသည်လိင်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ဆက်စပ်သည့် (ဥပမာအားဖြင့်စိတ္တဇပုံစံ) များကိုရွေးချယ်ရန်ပိုများကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဤအချက်သည်စွဲလမ်းသူတစ် ဦး ၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အပြစ်မဲ့ပုံများသည်လိင်ဆိုင်ရာပုံရိပ်များကိုရှာဖွေရန် 'လှုံ့ဆော်ပေး' နိုင်သည့်အယူအဆကိုထောက်ခံသည်။
ဒေါက်တာ Voon က“ အချက်အလက်များသည်သူတို့၏အင်တာနက်ဘရောက်ဇာကိုဖွင့်လိုက်ရုံမျှနှင့်ရိုးရှင်းနိုင်သည်။ "သူတို့ကလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမျိုးမျိုးကိုစတင်နိုင်ပြီးသူတို့မသိခင်မှာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလှန်လှောကြည့်နေသည်။ ဤအချက်များနှင့်အပြုအမူများအကြားဆက်စပ်မှုကိုချိုးဖောက်ခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ ”
တစ်ဦးသုတ်သင်သောအမျိုးသမီးတစ်ဦး, တစ်ဦး£ 20 အကြွေစေ့တစ်ခုသို့မဟုတ်ကြားနေမီးခိုးရောင်သေတ္တာ - သုတေသီ 20 လိင်စွဲနှင့် 1 ထပ်ခါတလဲလဲပုံရိပ်တွေတစ်စီးရီးပြခံရစဉ်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းဦးနှောက် Scan ဖတ်ခံယူလိုက်ဖက်ဘယ်မှာနောက်ထပ်စမ်းသပ်ထုတ်ဆောင်သွားကြ၏။
သူတို့ကဆုလာဘ်ထားချက်အရနှင့်တုံ့ပြန်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရမည်ကိုမသိ, လိင်စွဲသူတို့ dorsal anterior cingulate cortex အဖြစ်လူသိများသည်ဦးနှောက်၏ဒေသတွင်းလှုပ်ရှားမှု၏ကြီးမြတ်သောကျဆင်းခြင်းကြုံတွေ့ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှိုင်းယှဉ်, ထပ်တလဲလဲတူညီသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးသည့်အခါတွေ့ရှိခဲ့ အသစ်သောဖြစ်ရပ်များ။ အဆိုပါဥပမာ, တစ်ဦးကကော်ဖီသောက်သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးသောက်သောခွက်ကိုနေဖိန်း '' ဘတ်ဇ် '' get စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပိုမိုသူတို့ကော်ဖီမသောက်ရသေးငယ်တဲ့ - ဤအစှဲလမျးသူအတူတူပင်လျော့နည်းလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လျော့နည်းကြိုးတွေ့ဘယ်မှာ '' လေ့ 'နှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည် ဘတ်ဇ်ဖြစ်လာသည်။
ဒါဟာတူညီတဲ့လေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုထပ်တလဲလဲတူညီသောညစ်ညမ်းဗီဒီယိုအားပြသကြသူကျန်းကျန်းမာမာအထီးကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့ပြီးတော့အသစ်တခုဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုသောအခါ, အကျိုးစီးပွားနှင့် arousal ၏အဆငျ့မူရင်းအဆင့်အထိပြန်တတ်၏။ ဒီအလေ့ကာကွယ်တားဆီးဖို့, သောအဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သည်လိင်စှဲလမျးသူအသစ်သောရုပ်ပုံများကိုတစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြန့်ဖြူးထွက်ရှာအံ့သောငှါဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်။ တနည်းအားဖြင့်လေ့ဝတ္ထုပုံရိပ်တွေအဘို့အရှာဖွေရေးမောင်းနိုင်ဘူး။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းများ၏အခြေအနေတွင်အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြသည်" ဟုဒေါက်တာ Voon ကထပ်ပြောသည်။ "အွန်လိုင်းကပိုကအောင်, သူတို့ရဲ့စွဲအစာကျွေးကူညီပေးသည်ရရှိနိုင်ပါသည်ဒါဟာပထမဦးဆုံးဌာန၌လိင်စွဲကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းသောအရာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးင်ကြောင့်တချို့လူတွေကိုပိုပြီးအခြားသူတွေထက်စွဲမှ Pre-စွန့်ပစ်နေကြသည်ဖွယ်ရှိသည်, ဒါပေမယ့်ဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေ၏ထင်ရသောအဆုံးမဲ့ထောက်ပံ့ရေးနှင့် မှလွတ်မြောက်ရန်ပိုပြီးခက်ခဲ။ "
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: Paula BANCA et al ။ အသစ်အဆန်း, အေးစက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်မှအာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု, စိတ်ရောဂါသုတေသနဂျာနယ် (2016) ။ Doi: 10.1016 / j.jpsychires.2015.10.017
Paula BANCA, Laurel အက်စ်မောရစ်, ရှိမုနျကို Mitchell ကနီးလ်အေ Harrison, မာ့ခ် N. Potenza, Valerie Voon (ဒေါက်တာ)
အင်တာနက်ကိုအထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများမှလေးစားမှုနှင့်အတူ, ဝတ္ထုနှင့်ကြိုးလှုံ့ဆော်မှု၏ကြီးမားသောအရင်းအမြစ်ပေးပါသည်။ အသစ်အဆန်း-ရှာခြင်းနှင့် cue-အေးစက်စွဲပုံမမှန််ပတ်သက်နေ preference ကိုများနှင့်ချဉ်းကပ်အပြုအမူတွေကိုအခြေခံအခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်ကြသည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းမှဆွေမျိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်မှအေးစက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်အဆန်းများနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက် သာ. ကြီးမြတ် preference ကို hypothesizing, compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကို (CSB) နဲ့တဦးချင်းစီတွင်ဤဖြစ်စဉ်များဆန်းစစ်။ နှစ်ဆယ်နှစ် CSB အထီးလေးဆယ်အရွယ်-လိုက်ဖက်အထီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းအသစ်အဆန်းများနှင့် conditional လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ဦးစားပေးအာရုံစိုက်နှစ်ခုသီးခြားအပြုအမူတာဝန်များကိုအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ အုပ်စုတိုင်းကနေနှစ်ဆယ်ဘာသာရပ်များလည်းအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်သုံးပြီးတတိယအေးစက်နှင့်မျိုးသုဉ်းတာဝန်အတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ CSB နှိုင်းယှဉ်ပါကပုံရိပ်တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဘို့တိုးမြှင်အသစ်အဆန်း preference ကိုနဲ့ဆက်စပ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှိုင်းယှဉ်ကြားနေရလဒ်များသာရှိပြီးပြည်ပမှငွေကြေးမှအေးစက်တွေကိုတစ် generalized preference ကိုခံခဲ့ရသည်။ CSB တစ်ဦးချင်းစီမှာလည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်အဆန်းများအတွက်ပိုကောင်း preference ကိုအတူ correlating လေ့၏ဒီဂရီနှင့်အတူငွေကြေးဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေနှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထပ်ခါတလဲလဲပိုမို dorsal cingulate လေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အသစ်အဆန်း preference ကိုထံမှ dissociable လိင်အေးစက်တွေကိုမှချဉ်းကပ်အပြုအမူတွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေတစ်ခုအစောပိုင်းအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုက CSB တစ်ဦးချင်းစီဖြစ်နိုင်သည်ဆုလာဘ်မှအေးစက်တစ် generalized တိုးမြှင့်နှင့်အတူ သာ. ကြီးမြတ် cingulate လေ့ကကမကထပြုခဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်အဆန်းတစ်ခုအလုပ်မဖြစ်တိုးမြှင် preference ကိုရှိသည်ပြသထားတယ်။ ကျနော်တို့နောက်ထပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုများအတွက်အစောပိုင်းအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုအပေါ် cue-အေးစက်နဲ့အသစ်အဆန်း preference ကိုများအတွက် dissociable အခန်းကဏ္ဍအလေးပေး။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ကိုအင်တာနက်ဝတ္ထုနှင့်အလားအလာအကြိုးလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုကျယ်ပြန့်ကိုထောက်ပံ့ပေးအဖြစ်ကျယ်ပြန့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။
keywords: သစ်ခြင်း, cue-အေးစက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်, dorsal cingulate လေ့, စှဲမွဲမှု, အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု
အဘယ်ကြောင့်အွန်လိုင်း surfing ဒါလုပ်ပြီးကမြင်းနေကြတယ်အများအပြားတစ်ဦးချင်းစီမှပါဝငျပါသလဲ အင်တာနက်ကိုဝတ္ထုနှင့်အလားအလာအကြိုးလှုံ့ဆော်မှု၏ကြီးမားသောအရင်းအမြစ်ပေးပါသည်။ အသစ်အဆန်း-ရှာ, အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့် cue-အေးစက် နေ့စဉ်အသက်တာ၌သတိလစ် preference ကိုများနှင့်ချဉ်းကပ်ဆုံးဖြတ်ချက်များမောင်းစေခြင်းငှါအခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားဖြစ်စဉ်များကိုလည်းစွဲလမ်းပုံမမှန်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအထောက်အကူပြုပေမည်။
အသစ်ရှာဖွေခြင်းသည်ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်စွဲခြင်းမမှန်ခြင်း၏အကျိုးဆက်နှစ်ခုလုံးဖြစ်နိုင်သည်။ မကြာခဏ Zuckerman ၏အာရုံခံစားမှု - ရှာဖွေသည့်အတိုင်းအတာကို အသုံးပြု၍ အကဲဖြတ်လေ့ရှိသောဤလက္ခဏာကိုမတူကွဲပြားသောအမူအကျင့်နှင့်ပစ္စည်းစွဲလမ်းမှုတွင်များစွာတွေ့ရသည် (ဘီးလင်း et al ။ , 2011, Redolat et al ။ , 2009)။ ဒီခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ဦးကအကြံပြုရှင်းပြချက်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှု mediates သောတူညီအာရုံကြောစက်ယန္တရားအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်အသစ်အဆန်းထိတွေ့ခြင်းကိုသက်ဝင်စေခြင်းငှါ၎င်းအယူအဆအပေါ်မှီခို (Bardo et al ။ , 1996). ကြွက်လေ့လာမှုများမှာတော့အသစ်အဆန်း preference ကိုအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောကင်း-ရှာကြံအပြုအမူတွေ (ဘီးလင်းနှင့် Deroche-Gamonet, 2012) ဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့အကူးအပြောင်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။ လူ့လေ့လာမှုများအတွက်, အာရုံခံစားမှု-ရှာမြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာမူးရူးသောက်စား (Conrod et al ။ , 2013) နဲ့ Prospect ဆက်စပ်နေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အေးစက်အချက်ပြမှုများသို့မဟုတ်တွေကိုလည်းသိသိသာသာအပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်မြင်ဘို့စွဲပုံမမှန်အတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်စီးကရက်, နေရာတွေသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေအနံ့, ဒါမှမဟုတ်ပိုက်ဆံတို့ရှေ့မှာအဖြစ် Conditions တွေကိုပြုမူနိုင်ပြီး reactivity ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်မတရားသောဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, တိုကျတှနျးထားသနှင့် relapse ((Childress et al ။ , 1993) ) ။ ဤရွေ့ကားတွေကိုအမှတ်တမဲ့မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာ (Jansen, 1998) သို့မဟုတ်လိင်ကဲ့သို့အခြားဇီဝသက်ဆိုင်ရာသဘာဝကဆုလာဘ် (Pfaus et al ဖြစ်စေနှင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲတွဲဖက်မှုနှင့်အတူအေးစက်၏လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်စိတ်ခွန်အားနိုးအရေးပါမှုကိုဆည်းပူးစေခြင်းငှါကြားနေလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ကြသည်။ , 2001, Toates, 2009 ) ။
အသစ်အဆန်းများနှင့်သင်ယူမှုများ၏ processing အတွက် hippocampus, ventral striatum နှင့် midbrain dopaminergic ဒေသ (Lisman နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2005) ပတျသကျတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ polysynaptic ကွင်းဆက်ထည့်သွင်းရန်အဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်အဆန်း၏ detection, ရေရှည်မှတ်ဉာဏ် encoding ကနှင့်သင်ယူမှုတို့သည် ventral striatum မှ glutamatergic စီမံချက်များမှတဆင့်, ထို့နောက်ပြန် hippocampus (Knight ဟာ, တိုက်ရိုက်မှန်းချက်ရဲ့သော ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) ကိုသတင်းအချက်အလက်ထပ်ဆင့်လွှင်သော hippocampal Synaptic plasticity ပိုကောင်းစေပါတယ်ကြောင်း dopaminergic လှုပ်ရှားမှုကပါဝင်ပတ်သက် 1996, Lisman နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2005) ။ ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုနှင့်အတူအသစ်အဆန်းကျဆင်းခြင်းငှါ, hippocampus နှင့် midbrain dopaminergic တုံ့ပြန်မှု, လှုံ့ဆော်မှု (Bunzeck နှင့် Duzel, 2006, Bunzeck et al ။ , 2013) အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာသည့်အခါလေ့ဆွေးနွေး။ ဆုံမျောက်နှင့်လူ့လေ့လာမှုများကိုလည်း (။ Schultz et al 1997) phasic dopaminergic လှုပ်ရှားမှုခန့်မှန်းအမှား encodes, အမှန်တကယ်နှင့်အကြားတစ်ဦးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အေးစက်လုပ်ငန်းစဉ်များအခြေခံနေတဲ့သင်ကြားမှု signal ကိုအဖြစ်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးမျှော်လင့်မထားတဲ့အဓိကရလဒ်ညွှန်ပြရလဒ်များမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြသပါ။ အဆိုပါ striatum, dorsal anterior cingulate cortex (dACC) နှင့် hippocampus (ဝီလျံနဲ့ Goldman-Rakic, 1998) အပါအဝင်ကွန်ယက်ဖို့ midbrain စီမံကိန်းတွင် Mesolimbic dopaminergic ဆဲလ်အသေကောင်။ အဆိုပါ dACC (Rushworth et al, Ranganath နှင့် Rainer, 2003 ။ , 2011) ဝတ္ထုနှင့်အဓိကဖြစ်ရပ်များနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့ဆုလာဘ်မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းအမှားအတွက်တုံ့ပြန်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်။
အသစ်အဆန်း-ရှာခြင်းနှင့် cue-အေးစက်လွှမ်းမိုးမှုအပြင်, ဦးစားစွဲ၏အရာဝတ္ထုနှင့်ဆက်စပ်သောတွေကိုစီမံဆောင်ရွက်နိုင်ရန်စိတ်သဘောထား (အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု) ကိုလည်းစွဲလမ်းပုံမမှန် (Ersche et al ရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့ကြောင်းအရေးပါသော feature တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ , 2010, ဗန် Hemel-Ruiter et al ။ , 2013, Wiers et al ။ , 2011) ။ အာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်စဉ်များအပေါ်စိတ်ခံစားမှုလှုံ့ဆော်မှုများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကျယ်ပြန့်ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့လက်တွေ့နမူနာ (Yiend, 2010) တွင်နှစ်ဦးစလုံးအစီရင်ခံသည်။ ပစ္စည်းဥစ္စာ-related လှုံ့ဆော်မှုဆီသို့အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုအရက်, နီကိုတင်း, ဆေးခြောက်, opiates နှင့်ကိုကင်းဘို့ဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်တှငျတှေ့ခဲ့ကြ (ကော့ et al ။ , 2006) ။ ထို့အပွငျမွငျ့မားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓါတ်ပုံတွေကိုနှိုးဆွသောနှင့်အာရုံကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်အကြားတိုက်ရိုက်အသင်းအဖွဲ့လည်းလိင်-related သဘောထားများနှင့်လိင်လှုံ့ဆျောမှုကလွှမ်းမိုးခံရဖို့ပုံရသည်ဖြစ်သောကျန်းမာတစ်ဦးချင်းစီမှာတွေ့ရှိထားပြီး (Kagerer et al ။ , 2014, Prause et al ။ , 2008) ။ ကျနော်တို့ယခင်က dot-စုံစမ်းစစ်ဆေးတာဝန်သုံးပြီးအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) နဲ့တဦးချင်းစီအားဤတွေ့ရှိချက်များတိုးချဲ့ခဲ့ကြ (Mechelmans et al ။ , 2014) ။
အင်တာနက် access ကိုတိုးမြှင့်မှုနှင့်အတူအလွန်အကျွံအသုံးပြုမှုများအတွက်အလားအလာနှင့် ပတ်သက်. ကြီးထွားလာစိုးရိမ်ပူပန်မှုလည်းမရှိ။ compulsive ကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် Internet application များအများအပြားအမျိုးအစားများ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ပါဝါ (စသည်တို့ကိုဂိမ်းကစားခြင်း, လောင်းကစား, အီးမေးလ်,) အကဲဖြတ်ကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခုအအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုစွဲလမ်း / compulsive အသုံးပြုမှု (Meerkerk et al ဘို့အမြင့်ဆုံးအလားအလာရှိသည်အကြံပြုသည်။ , 2006) ။ အွန်လိုင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလှုံ့ဆော်မှုကျယ်ပြန့်ဖြစ်ကြပြီးတိုးချဲ့, ဤအင်္ဂါရပ်အချို့တစ်ဦးချင်းစီအတွက်အသုံးပြုမှုတင်းမာမှုမြှင့်တင်ရန်လိမ့်မည်။ ဥပမာ, ထပ်တလဲလဲတူညီသောရှင်းလင်းပြတ်သားစွာရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုကျန်းမာအထီးလျော့နည်းလိင်နှိုးဆွသောနည်းအစာစားချင်စိတ်နည်းကိုစုပ်ယူ (Koukounas နှင့်ကျော်, 2000) အဖြစ်တဖြည်းဖြည်းယင်းစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုမှ habituate နှင့်အကဲဆတ်သောလှုံ့ဆော်မှုကိုရှာတွေ့ပါပြီ။ သို့သော်ဝတ္ထုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာရုပ်ရှင် segment တစ်ခုသို့နောက်ဆက်တွဲထိတွေ့မှုအသစ်အဆန်းများနှင့်လေ့များအတွက်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်း, လေ့မှကြိုတင်အတူတူပင်ယခင်အဆင့်ဆင့်မှလိင်စိတ်နိုးထနှင့်စုပ်ယူမှုများ၏အဆင့်ဆင့်တိုးပွားစေပါသည်။ imaging လေ့လာမှုများ hypothalamus, နျူကလိယ accumbens, orbitofrontal, occipital နှင့် parietal ဒေသများပါဝင်သည်, ကျန်းမာသောလူသားမြားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏အာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့တိကျတဲ့ကွန်ယက်ကိုဖော်ထုတ်ကြ (Wehrum et al ။ , 2013, Wehrum-Osinsky et al ။ , 2014) ။ ယောက်ျားယောက်ျားတစ်ဦးပိုမိုအားကောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Response ၏ညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်ရသောအမျိုးသမီးများ, ထက်ခြုံငုံအားကောင်း Active ကိုပြသပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်စိတ်ခံစားမှု arousal ၏လွတ်လပ်သောသောဤအာရုံကြောကွန်ယက်ကို, ယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်နှစ်ဦးစလုံးကိုတွေ့သည်။ အလားတူအာရုံကြောကွန်ယက်ကိုတူညီတဲ့ဦးတည်ချက်အတွက်ကျားမသက်ရောက်အတူလိင်စိတ်နိုးထအေးစက်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်မြှင့်လုပ်ဆောင် (Klucken et al ။ , 2009) ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုတှငျကြှနျုပျတို့ CSB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အွန်လိုင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှအသစ်အဆန်း, အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့် cue-အေးစက်အကဲဖြတ်ရန်။ ဤရွေ့ကားဖြစ်စဉ်များပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်ဖို့အလွန်အမင်းသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြပြီးလည်း CSB မှသက်ဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်သည်။ အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု compulsive အသုံးပြုမှုအတွက်သိသာထင်ရှားသောအလားအလာရှိသည်, CSB အတော်လေးဘုံဖြစ်ပါသည်, အသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်ကောလိပ်ကျောင်း-based ငယ်ရွယ်လူကြီးများနှင့်စိတ်ရောဂါအတွင်းလူနာ (Grant က et al ။ , 2, Odlaug နှင့် Grant ကအတွက်%4မှ 2005 ဖြစ်ပွားနေသော 2010, Odlaug et al ။ , 2013) ။ CSB သိသိသာသာဒုက္ခဆင်းရဲ, အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ခံစားချက်များကိုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အဆိုပါ 11 များအတွက်အလုပ်လုပ်အုပ်စုတစ်စုပေမယ့်th ရောဂါ၏နိုင်ငံတကာခွဲခြားရေး၏ထုတ်ဝေလက်ရှိတွင်တစ်ခုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့-ထိန်းချုပ်မှုရောဂါအဖြစ် CSB ထည့်သွင်းရန်အဆိုပြုနေသည် (Grant က et al ။ , 2014) အချို့သောအငြင်းပွားဖွယ်ရာ (Toussaint နှင့် Pitchot, 5) နဲ့ဆိုသော်ငြား CSB အဓိကအား, DSM-2013 တွင်ထည့်သွင်းမခံခဲ့ရ ကန့်သတ်ဒေတာကြောင့်။ ထို့ကြောင့်နောက်ထပ်လေ့လာမှုတွေလိုအပ်နေပါသည်။ CSB နှင့်အခြားစိတ်ရောဂါမမှန်, အထူးသဖြင့်အရင်းခံတွန်းအား-ထိန်းချုပ်မှုပုံမမှန်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းမှုကိုအကြားတူညီနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုကိုနားလည်ခြင်း, တိုးတက်လာသောကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုချဉ်းကပ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူခွဲခြားအားထုတ်မှုအဖြစ်ကူညီလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့အရင်ကစွဲပုံမမှန်အတွက်မူးယစ်ဆေး cue reactivity ကိုနှင့်တဏှာ်ပတ်သက်နေဒေသများ, CSB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် ventral striatum, dorsal anterior cingulate cortex (dACC) နှင့် amygdala အတွက်အကဲဆတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုတုန့်ပြန် သာ. ကြီးမြတ်ဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်ကို Activation ကိုသရုပ်ပြကြောင်းတွေ့ပြီ (Voon et al ။ , 2014) ။ functional ဤကွန်ယက်၏ဆက်သွယ်မှုများနှင့်အထူးသဖြင့် dACC, ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလှုံ့ဆော်မှုပိုမိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒသို့မဟုတ်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့နောက်ထပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို (Mechelmans, Irvine, 2014) ဆီသို့ဦးတည်ထားတဲ့အစောပိုင်းအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုသရုပ်ပြ, မပါဘဲသူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ပါက CSB နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကြောင်းလေ့လာသည်။ ဤသည်အစောပိုင်းအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များမှအေးစက်တွေကိုများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုအခြေခံ facilitatory ယန္တရားများကိုထင်ဟပ်ဖို့အဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနအာရုံစိုက်အကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့် CSB အတွက်ပိုကောင်းအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့် cue reactivity ကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအခြေခံသည့်ယန္တယားစုံစမ်းစစ်ဆေးအပြုအမူနှင့်အာရုံကြောနှစ်ခုလုံးကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းအသစ်အဆန်းရန်နှင့်အကဲဆတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန် cue-အေးစက်မှတုံ့ပြန်မှု.
ကျနော်တို့အကျွမ်းတဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှိုင်းယှဉ်ဝတ္ထုနှင့်လိင်ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့နှင့်ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုမှအေးစက်တွေကိုအဘို့ရှေးခယျြမှု preference ကိုအဘို့အရှေးခယျြမှု preference ကိုအကဲဖြတ်ရန်ရန်ကင်နာပြင်ပတွင်နှစ်ခုအမူအကျင့်တာဝန်များကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်း (HVs) မှဆွေမျိုး CSB တစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေမဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေအကျွမ်းတဝင်ပုံရိပ်တွေဖို့ဝတ္ထုဆွေမျိုးပိုမိုရွေးချယ်မှု preference ကိုရှိလိမ့်မယ်လို့တွေးဆ။ ကျနော်တို့နောက်ထပ် CSB ဘာသာရပ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွအေနေအတွက်အေးစက်တွေကိုပိုမိုရွေးချယ်မှု preference ကိုရှိပေမယ့်မငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့အခြေအနေမယ်လို့တွေးဆ။
သင်တန်းသားများကိုလည်းလိင်, ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့နှင့်ကြားနေပုံရိပ်တွေမှအေးစက်ပတျသကျတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) အေးစက်နှင့်မျိုးသုဉ်းတာဝန်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ဦးကကြားနေလှုံ့ဆော်မှုကျပန်းအေးစက်နေစဉ်အတွင်းထပ်တလဲလဲပြကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေနှင့်အတူတွဲခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအေးစက်လက်မောင်းများ၏ရလဒ်ကိုအဆင့်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှအာရုံကြောဆိုင်ရာလေ့ဖြင့်အေးစက်နှင့်ရလဒ်ကိုအဆင့်၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ dissociating ဟာထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်၏အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအတွင်းပြောင်းလဲမှုအကဲဖြတ်များကအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ HVs မှဆွေမျိုး CSB ဘာသာရပ်များအထူးသဖြင့် dACC နှင့် striatum အတွက်ကြားနေ conditional လှုံ့ဆော်မှုနှိုင်းယှဉ်အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှပိုကောင်းအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုပြသမယ်လို့တွေးဆ, ဒေသများတွင်ယခင်က CSB ဘာသာရပ်များ (Voon, မှဲ့, 2014) တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue reactivity ကိုအတွက်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့နောက်ထပ် HVs နှိုင်းယှဉ် CSB ဘာသာရပ်များကြားနေလှုံ့ဆော်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုမိုအာရုံကြောလေ့ကိုပြသမယ်လို့တွေးဆ။
အဆိုပါစုဆောင်းမှုကျယ်ကျယ်တခြားနေရာ (Voon, မှဲ့, 2014) ဖော်ပြထားခဲ့သည်။ CSB ဘာသာရပ်များတွင်အင်တာနက်-based ကြော်ငြာများနှင့်ကုထုံးရည်ညွှန်းနေတဆင့်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ HVs အရှေ့ Anglia အတွက်လူထုအခြေပြုကြော်ငြာကနေစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ CSB ဘာသာရပ်များသူတို့ CSB များအတွက်အဖြေရှာတဲ့စံ (Hypersexual Disorder များအတွက်အဆိုပြုအဖြေရှာတဲ့စံ; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲများအတွက်စံ) မပြည့်စုံအတည်ပြုဖို့စိတ်ရောဂါများကတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ကြ (။ Carnes et al, 2001, Kafka, 2010, ရိဒ် et al, 2012 ။ ), အာရုံစိုက် အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်း compulsive အသုံးပြုခြင်း။
CSB ဘာသာရပ်များနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများရှိအိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုးရှိသူအားလုံးသည်အမျိုးသားများနှင့်လိင်ကွဲများဖြစ်ကြသည်။ HVs သည်စာရင်းအင်းစွမ်းအားကိုတိုးမြှင့်ရန် CSB ဘာသာရပ်များနှင့် 2: 1 အချိုးအစားနှင့်လိုက်ဖက်သည်။ သီးသန့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်အသက် ၁၈ နှစ်အောက်၊ ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုမမှန်မှုသမိုင်း၊ တရားမ ၀ င်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုပုံမှန်သုံးစွဲသူ (ဆေးခြောက်အပါအ ၀ င်) နှင့်လက်ရှိအလယ်အလတ် - ပြင်းထန်သောအဓိကစိတ်ကျရောဂါအပါအ ၀ င်ပြင်းထန်သောစိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါ (Beck Depression Inventory> 18) တို့ပါဝင်သည်။ obsessive- compulsive ရောဂါ, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကြွရောဂါသို့မဟုတ် schizophrenia ၏သမိုင်း (Mini ကိုနိုင်ငံတကာအာရုံကြောအထူးကု Inventory) (Sheehan et al ။ , 20) ။ အခြားမဖြစ်မနေသို့မဟုတ်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသည်ချန်လှပ်ခြင်းများဖြစ်ပြီးအွန်လိုင်းဂိမ်းသို့မဟုတ်လူမှုမီဒီယာများပြproblemနာကိုအသုံးပြုခြင်း၊ ရောဂါဗေဒလောင်းကစားခြင်းသို့မဟုတ်စျေးဝယ်ခြင်းနှင့်အရက်သောက်ခြင်းရောဂါအပါအဝင်စိတ်ရောဂါကုသသူမှအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
ဘာသာရပ်များအတွက် UPPS-P ကို ​​Impulse အပြုအမူစကေး (Whiteside နှင့် Lynam, 2001), Beck စီးပွားပျက်ကပ် Inventory (Beck et al ။ , 1961) ပြီးစီးခဲ့, ပြည်နယ်စရိုက်များတော့ပူပန် Inventory (Spielberg et al ။ , 1983) နှင့်အရက်-အသုံးပြုမှု Disorders သတ်မှတ်ခြင်းစမ်းသပ်ခြင်း ( စာရင်းစစ်) (Saunders et al ။ , 1993) ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အရွယ်ရောက်စာဖတ်ခြင်းစမ်းသပ်ခြင်း (နယ်လ်ဆင်, 1982) အိုင်ကျူတစ်ခုအညွှန်းကိန်းရရှိရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
နှစျခု CSB ဘာသာရပ်များစိတ်မကျဆေး Antidepressants တာနဲ့စိုးရိမ်စိတ်ရောဂါနှင့်လူမှုရေး phobia ယေဘူယျ comorbid ခဲ့ခဲ့ကြသည်: လူမှုရေး phobia (N ကို = 1) နှင့် ADHD တစ်ကလေးဘဝသမိုင်း (N ကို = 1) ။
Written အသိပေးသဘောတူညီခကျြရရှိခဲ့သညျနှင့်လေ့လာမှုကင်းဘရစ်သုတေသနကျင့်ဝတ်ကော်မတီမှတက္ကသိုလ်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဘာသာရပ်များ၎င်းတို့၏ပါဝင်မှုများအတွက်ပေးဆောင်ခဲ့သည်။
အထီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်အလားတူအသက်နှစ်ဆယ်နှစ် CSB ဘာသာရပ်များနှင့် 40 တစ်ဦးအသစ်အဆန်း-preference ကိုအတွက်လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်အကဒီမှာအစီရင်ခံနှစ်ခုအေးစက်-preference ကိုတာဝန်များကိုနှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုလုပ်ငန်းတာဝန် (dot-စုံစမ်းစစ်ဆေးတာဝန်) တခြားနေရာအစီရင်ခံ (Mechelmans, Irvine, 2014) ။ အဆိုပါလုပ်ငန်းများကိုတစ်ဦး counterbalanced နိုင်ရန်အတွက်အဆိုပါ fMRI စမ်းသပ်မှုအပြီးထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
အသစ်အဆန်း preference ကို
ဘာသာရပ်များလှုံ့ဆော်မှုသုံးခုအမျိုးအစား (လိင်ပုံများ, ကြားနေလူ့ images နဲ့ကြားနေအရာဝတ္ထုပုံရိပ်တွေ) မှ familiarized ပြီးတော့တစ်ဦးချင်းစီအမျိုးအစားအတွင်းလိုက်ဖက်အကျွမ်းတဝင်လှုံ့ဆော်မှုနှိုင်းယှဉ်ဝတ္ထုအကြားရွေးချယ်ရာတွင်တစ်ဦးရွေးချယ်မှု-ခွဲခြားဆက်ဆံမှုစမ်းသပ်အဆင့်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြ (ပုံ 1A)။ အဆိုပါရင်းနှီးကျွမ်းအဆင့်များတွင်ခြောက်လပုံတွေကိုပါဝင်သူပြခဲ့ကြသည်: သုတ်သင်သောအမျိုးသမီးများ၏2ပုံရိပ်တွေ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွအေနေ), ဝတ်ဆင်အမျိုးသမီးများ၏2ပုံရိပ်တွေ (Control1) နှင့်ပရိဘောဂတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်း၏2ပုံရိပ်တွေ (Control2) (အခွအေနေနှုန်း2ပုံရိပ်တွေ). အဆိုပါ6ပုံရိပ်တွေကျပန်း 48 စမ်းသပ်မှုတွေ (16 စမ်းသပ်မှုတွေအသီးအသီးအခွအေနေ) ၏စုစုပေါင်းထဲမှာ, သင်တန်းသားများအားလုံးအတွက်တင်ပြခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုရုံးတင်စစ်ဆေး၏ကြာချိန်5စက္ကဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့ရင်းနှီးကျွမ်းအဆင့်စဉ်အတွင်းမေးခွန်းများကိုမေးလိမ့်မယ်လို့ကြောင့်တာဝန်နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုသေချာစေရန်, ဘာသာရပ်များဂရုတစိုက်ပုံရိပ်တွေလေ့လာဖို့ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ (: 'လက်နက်ကူး' 'ဥပမာသူမ၏လက်မောင်းလက်ျာသို့မဟုတ်လက်ဝဲမြှားသုံးပြီးကူးခဲ့သောအမျိုးသမီးတစ်ဦးညွှန်ပြရန်) သည်ပုံရိပ်တွေအကြောင်းကိုရိုးရှင်းသောမေးခွန်းများကိုကျပန်းဟာအချင်းချင်းရုံးတင်စစ်ဆေးကြားကာလအတွက်တာဝန်စဉ်အတွင်း စုပေါင်း. ခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုမေးခွန်းတစ်ခုကိုဤအရပ်မှဘာသာရပ်များပုံရိပ်တွေတစ်ခုချင်းစီ pair တစုံဖို့အာရုံကိုထိန်းသိမ်းထားကြောင်းသေချာ, ရုပ်ပုံများ၏ယခင်ကရှုမြင်ကြသည် pair တစုံဖို့သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ခဲ့သည်။
အသစ်အဆန်းများနှင့်အေးစက်အပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်များ။ အေပစ္စည်းအသစ်အဆန်း preference ကို: တာဝန်နှင့်ရလဒ်။ ဘာသာရပ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ images နဲ့အနိုင်ရတဲ့နှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့အကျွမ်းတဝင်သို့မဟုတ်လိုက်ဖက်ဝတ္ထုရွေးချယ်မှုကျပန်း (p = 0.50) တို့အကြားရွေးချယ်ရာတွင်ပတျသကျတဲ့ရွေးချယ်မှု-ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတာဝန်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်နှစ်ခု Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်ပုံရိပ်တွေနှင့်အတူ familiarized ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဂရပ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) နဲ့ဘာသာရပ်များအတွက်စမ်းသပ်မှုတွေနဲ့ကျန်းကျန်းမာမာစတေနာ့ဝနျထမျး (HV) ကိုဖြတ်ပြီးအသစ်အဆန်းရွေးချယ်မှုများ၏အချိုးအစားပြသထားတယ်။ ခကိုက်: တာဝန်နှင့်ရလဒ်။ အဆိုပါလိင်အေးစက်တာဝန်ပြသနေသည်။ အေးစက်နေစဉ်၊ အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်အမြင်အာရုံပုံစံ (CS + Sex and CS-) နှစ်ခုအားနောက်ဆက်တွဲလိင် (သို့) ကြားနေပုံများဖြင့်လိုက်နာသည်။ ရွေးချယ်မှုခွဲခြားဆက်ဆံမှုစမ်းသပ်ခြင်းကာလအတွင်းဘာသာရပ်များသည် CS + Sex နှင့် CS- အကြားရွေးချယ်ထားသောအမြင်အာရုံပုံစံလှုံ့ဆော်မှုများ (A နှင့် B) နှင့်ရွေးချယ်သည်။ CS + Sex နှင့် CS- လှုံ့ဆော်မှုများသည်အနိုင်ရခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ခြေများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များ (ဘယ်ဘက်) နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာရလဒ်များ (ညာ) အတွက် CSB နှင့် HV စမ်းသပ်မှုများမှတဆင့်အခြေအနေများလှုံ့ဆော်မှုရွေးချယ်မှုအချိုးအစားကိုဂရပ်များကပြသသည်။ * Group မှ -Valence အပြန်အလှန်: p <0.05 ။
စမ်းသပ်အဆင့်မှာတော့ဘာသာရပ်များတစ်ဦးအကျွမ်းတဝင်ပုံရိပ်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီစမ်းသပ်အခွအေနေအဘို့အလိုက်ဖက်မယ့်ဝတ္ထုပုံရိပ်ကိုပါဝင်သည်ဟုသုံးပုံရိပ်-အားလုံးအတွက်ရှုမြင်ကြသည်။ ခြောက်လပုံရိပ်တွေအသုံးပြုခဲ့ကြသည်: ယခင်ရင်းနှီးကျွမ်းအဆင့် (ထိုသုံးမျိုးသောအခြေအနေများအသီးအသီးအဘို့တယောက်) နှင့်3အသစ်ကပုံရိပ်တွေ (တစ်ဦးချင်းစီအခွအေနေဘို့တဝတ္ထု) မှရှေးခယျြထား,3အကျွမ်းတဝင်။ အဆိုပါပုံရိပ်-pair တစုံ (£ 2.5 အနိုင်ရသို့မဟုတ်ဘာမျှအနိုင်ရ) တစ်ဦး 1-ဒုတိယတုံ့ပြန်ချက်များကနောက်တော်သို့လိုက် 1 စက္ကန့်ကိုပြသခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ 60 စမ်းသပ်မှုတွေ (20 စမ်းသပ်မှုတွေအသီးအသီးအခွအေနေ) ၏တစ်ဦးစုစုပေါင်းတင်ပြခဲ့ကြသည်။ ရုပ်တုဆင်းတုများကိုမဆိုဘို့အနိုင်ရများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေ p = 0.50 မှာကျပန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါဘာသာရပ်တတ်နိုင်သမျှငွေရှာဖို့ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူ pair တစုံကနေလှုံ့ဆော်မှုများ၏တဦးတည်းရွေးချယ်ဖို့ညွှန်ကြားထားသူတို့ဝင်ငွေများတစ်ဦးအချိုးအစားကိုလက်ခံရရှိမယ်လို့ကြားပြောလေ၏။ သူတို့ကပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှန်းဆဖြစ်ပေမယ့်လှုံ့ဆော်မှုတဦးအနိုင်ရတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ဆက်စပ်လိမ့်မယ်လို့မယ်လို့ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါမူလတန်းရလဒ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ဦးချင်းစီအခွအေနေအဘို့အစမ်းသပ်မှုတွေကိုဖြတ်ပြီးဝတ္ထုရွေးချယ်မှုများ၏အချိုးအစားဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီနေရာမှာအသုံးပြုတဲ့သင်ယူခြင်းပေါ်ဖြစ်ပေါ် (p = 0.50) သက်သက်သာကျပန်းခဲ့ကြသည်ကတည်းကရလဒ်အတိုင်းအရှည်သီးသန့်တစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှု preference ကိုဖော်ပြသည်။ လေ့လာမှုပြီးနောက်ဘာသာရပ်များအောက်ပါစမ်းသပ် 1 မှ 10 တစ်စကေးပေါ်တွင်အမျိုးသမီးဘာသာရပ်များ၏ဆွဲဆောင်မှုဘယ်လောက်ရှိသလဲဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ Task ကိုကြာချိန် 8 မိနစ် (ထိုစမ်းသပ်မှုအဆင့်များအတွက်သင်တန်းနှင့်4မိဘို့ 3.5 မိ) ဖြစ်ခဲ့သည်။
အေးစက် preference ကို
ဘာသာရပ်များ (နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးအေးစက်အဆင့်နှင့်တစ်ဦးစမ်းသပ်အဆင့်ပါဝင်သည်ဟုတစ် counterbalanced နိုင်ရန်အတွက်နှစ်ဦးကိုအေးစက် preference ကိုတာဝန်များကိုအပေါ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြပုံ 1B က) ။ နှစ်ဦးစလုံးတာဝန်များကိုတူညီတဲ့ဒီဇိုင်းပေမယ့်ငွေကြေးအေးစက်အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အခြားအပေါ်အာရုံစူးစိုက်တဦးတည်းရှိခဲ့ပါတယ်။
တဦးတည်းလေ့ကျင့်ရေးအဆင့်မှာတော့2စက္ကန့်များအတွက်တင်ဆက်နှစ်ခုအမြင်အာရုံပုံစံများ (CS + လိင်, CS-), အသီးသီးအနေနဲ့သုတ်သင်သောအမျိုးသမီးတစ်ခုသို့မဟုတ်ကြားနေမီးခိုးရောင်သေတ္တာ (1-ဒုတိယရလဒ်ကို) ၏ပုံတစ်ပုံမှအေးစက်ခဲ့သည်။ ဤသည် 0.5 ဒုတိယဖို့ 1 တစ်ခုအကြားရုံးတင်စစ်ဆေးကြားကာလအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ ခြောက်ဆယ်စမ်းသပ်မှုတွေစုစုပေါင်း (30 CS အတွက်တင်ပြခဲ့ကြသည်+ နှင့် 30 CS-) ။ အလုပ်တခုကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုသေချာစေရန်, ဘာသာရပ်များသူတို့ရလဒ်ကို image ကိုလှည့်ပတ်နေတဲ့အနီရောင်စတုရန်းကိုမြင်လျှင်အကြိမ်အရေအတွက်ကခြေရာခံစောင့်ရှောက်ဖို့ညွှန်ကြား, သူတို့သင်တန်းအဆင့်ရဲ့အဆုံးမှာဒီနံပါတ်ကိုအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါလေ့ကျင့်ရေးအဆင့်တစ်ဦးစမ်းသပ်အဆင့်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့ CS + လိင်နှင့် CS- လှုံ့ဆော်မှုစီဝတ္ထုအမြင်အာရုံ-ပုံစံလှုံ့ဆော်မှု (အသီးသီးဥပမာ Image ကိုတစ်ဦးသို့မဟုတ် Image ကိုခ) နှင့်အတူတွဲခဲ့ကြရသော။ ဘာသာရပ်များ (ဥပမာ CS + လိင်သို့မဟုတ် Image ကိုတစ်ဦးက; CS- သို့မဟုတ် Image ကို B ကို; ကြာချိန် 2.5 စက္ကန့်) ကိုနှိုးဆွ pair တစုံကနေလှုံ့ဆော်မှုတဦးကိုရှေးခယျြဖို့တောင်းခဲ့အနိုင်ရရှိ£ 1 ၏တုံ့ပြန်ချက်များကနောက်တော်သို့လိုက်သို့မဟုတ်ဘာမျှမ (ကြာချိန် 1 ဒုတိယ) အနိုင်ရခဲ့သော ။ အဆိုပါ CS + လိင်နှင့် CS- အနိုင်ရတဲ့၏ကြီးမြတ်သောဖြစ်နိုင်ခြေ (p = 0.70 အနိုင်ရရှိ£ 1 / p = 0.30 ဘာမျှအနိုင်ရ) သည်ဝတ္ထုတွဲလှုံ့ဆော်မှု (p = 0.70 ဘာမျှ / p = 0.30 အနိုင်ရရှိ£ 1 အနိုင်ရ) မှဆွေမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘာသာရပ်များစုစုပေါင်း (ခွအေနအေနှုန်း 40 စမ်းသပ်မှုတွေ) တွင် 20 စမ်းသပ်မှုတွေအဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်တတ်နိုင်သမျှငွေရှာဖို့ပဲသူတို့ဝင်ငွေများတစ်ဦးအချိုးအစားခံယူမယ်လို့ပြောတယ်။ သူတို့ကပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုတစ်ခုမှန်းဆဖြစ်ပေမယ့်လှုံ့ဆော်မှုတဦးအနိုင်ရတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ဆက်စပ်လိမ့်မယ်လို့မယ်လို့ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
ဒုတိယသင်တန်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်အလားတူလုပ်ငန်းတာဝန်ဒီဇိုင်းငွေကြေးဆိုင်ရာရလဒ်များနှင့်အတူတွဲအသုံးပြုခဲ့သည်: အမြင်အာရုံပုံစံများမတူညီ set ကို£ 1 တစ်ခုသို့မဟုတ်ကြားနေမီးခိုးရောင် box ရဲ့ပုံရိပ်မှ (CS + ငွေ, CS-) အေးစက်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာသာရပ်များသူတို့ရှုမြင်ကြသည်ပိုက်ဆံတစ်ဦးအချိုးအစားအနိုင်ရမယ်လို့ပြောတယ်။ အလားတူစမ်းသပ်အဆင့်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။
အဆိုပါ CS + နှင့် CS- လှုံ့ဆော်မှုအနိုင်ရမြင့်မားဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည့်အတိုင်း, ငါတို့အသစ်အဆန်းရွေးချယ်မှုကနဦးချဉ်းကပ်အပြုအမူတွေကိုအကဲဖြတ်ရန်ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုများ preference ကိုနှင့်ကပ်ကာလ၏အချိုးအစားအကဲဖြတ်သည့် CS + နှင့် CS- လှုံ့ဆော်မှုများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအကဲဖြတ်ရန်အားလုံးစမ်းသပ်မှုတွေကိုဖြတ်ပြီးမရွေးခဲ့ကြ ဆာသင်ယူမှုအပေါ် cue ၏ရွေးချယ်မှု preference ကို။ တစ်ခုချင်းစီကိုတာဝန်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်7မိနစ် (ထိုစမ်းသပ်မှုအဆင့်များအတွက်သင်တန်းနှင့်4မိဘို့ 2.5 မိနစ်) ကြာခဲ့သည်။
နှစ်ဆယ် CSB ဘာသာရပ်များနှင့် 20 HVs (ကအေးစက်နှင့်မျိုးသုဉ်းတာဝန်ဖျော်ဖြေ scan ဖတ်ခဲ့ကြသည်ကိုက်ညီပုံ 3တစ်ဦးက) ။ အဆိုပါအေးစက်အဆင့်များတွင်ခြောက်လပုံရိပ်တွေ (ရောင်စုံပုံစံများ) တစ်ခုသုတ်သင်သောအမျိုးသမီး (CS + လိင်) ၏ခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု (ယူအက်စ်) ပုံရိပ်, £ 1 (CS + ပိုက်ဆံ) သို့မဟုတ်တစ်ဦးကြားနေမီးခိုးရောင်သေတ္တာနှင့်အတူတွဲအေးစက်လှုံ့ဆော်မှု (CS +) အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည် (CS-) ။ နှစ်ဦးကို CS + ရလဒ်ကိုနှုန်းတွဲခဲ့ကြသည်။ သုတ်သင်သောအမျိုးသမီး၏ငါးကွဲပြားခြားနားသောရုပ်ပုံများကိုအေးစက်၏သင်တန်းကျော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲ 8 ကြိမ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ CS + ကြာချိန် 2000 msec ရှိ၏ 1500 msec မှာအမေရိကန် 500 msec များအတွက်မွမ်းမံလေ၏ခဲ့ 500 ထံမှ 2500 msec အရွယ်ရှိတဲ့ဗဟို fixation အမှတ်နဲ့တုန့်ပြန်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကြောင့်နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ task ကိုမှအာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့, ဘာသာရပ်များပိုက်ဆံရလဒ်ကို, လူတစ်ဦးရလဒ်ကိုအဘို့အညာဘက်ခလုတ်, နှင့် fixation ကာလအတွင်းကြားနေရလဒ်ကိုအဘို့ဖြစ်စေခလုတ်ကိုများအတွက်လက်ဝဲ button ကိုဖိလေ၏။ ဘာသာရပ်များအတွက်အေးစက်အဆင့် 120 စမ်းသပ်မှုတွေ (CS + နှုန်း 20 သို့မဟုတ်အခွအေနေနှုန်း 40) ၏စုစုပေါင်းရှုမြင်ကြသည်။ အဆိုပါအခြေအနေများကျပန်းတင်ပြခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါမျိုးသုဉ်းအဆင့်မှာတော့တစ်ဦးချင်းစီ CS + 2000 (90 msec 15 ရန်) တစ်ဦး fixation အချက်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် 30 စမ်းသပ်မှုတွေ (CS + နှုန်း 500 သို့မဟုတ်အခွအေနေနှုန်း 2500) ၏စုစုပေါင်းအမေရိကန်မပါဘဲ msec အဘို့အပြခံခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် 1500 msec မှာဘာသာရပ်များမမျှော်လင့်ဘဲချန်လှပ်ခဲ့သည့်တစ်ဦးရလဒ်ကို, မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်။ လေ့လာမှုမတိုင်မီကဘာသာရပ်များတုံ့ပြန်မှုပိတ်ပင်တားဆီးမှုစဉ်အတွင်းမော်တာတုံ့ပြန်မှုလေ့ကျင့်ဖို့အလားတူကွဲပြားခြားနားသော CS + ဖြင့်ဒီဇိုင်းနှင့်အမျိုးသမီး, ငွေကြေးနှင့်ကြားနေပစ္စည်းများပုံရိပ်တွေ၏ 20 စမ်းသပ်မှုတွေပေါ်တွင်စကင်နာပြင်ပတွင်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ ယင်းအလေ့အကျင့်စဉ်အတွင်းဘာသာရပ်များဝတ်ဆင်အမျိုးသမီး၏ပုံရိပ်များကိုကြည့်ရှုအားပေးပေမယ့်ကင်နာ, သူတို့သည်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလှုံ့ဆော်မှုကိုမြင်ရအံ့သောငှါပြောတယ်။ အားလုံးတာဝန်များကို E-ချုပ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် v2.0 software ကိုသုံးပြီးပရိုဂရမ်ခဲ့ကြသည်။
အုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးရွေးချယ်မှုဦးစားပေးများနှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုတို့အကြားဆက်ဆံရေးမျိုး။ ဘယ်ဂရပ်ကလိင်နှင့်ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုကိုစောစီးစွာဘက်လိုက်မှုရမှတ်များ (မြင့်မားသောရမှတ်များက CS + Sex ကိုအုပ်စုနှစ်မျိုးလုံးတွင်ပထမ ဦး ဆုံးရွေးချယ်မှုအဖြစ် CS-Sex နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက CS + Sex အားပိုမိုနှစ်သက်သောဘာသာရပ်များတွင်ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်များကလိင်နှင့်ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုကိုဖော်ပြသည်) ကိုပြသည်။ * p <0.05 ။ ညာဘက်ဂရပ်ကအကျွမ်းတဝင်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဝတ္ထုလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုပိုမိုနှစ်သက်သောသူများတွင်လိင်နှင့်ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာအစောပိုင်းဘက်လိုက်မှုရမှတ်များကိုပြသည်။
အေးစက်ပုံရိပ်တာဝန်နှင့်လေ့. A. အ Imaging ကတာဝန်။ အေးစက်စဉ်အတွင်းဘာသာရပ်များတစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့သို့မဟုတ်ကြားနေပုံရိပ်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခြောက်လအရောင်ပုံစံများရှုမြင်ကြသည်။ အဆိုပါမျိုးသုဉ်းအဆင့်အေးစက်လှုံ့ဆော်မှုချွင်းချက်မရှိနှိုးဆွခြင်းမရှိဘဲပြခဲ့သည့်ကာလအတွင်းနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ ခလေ့။ ကြားနေပုံရိပ်တွေနှိုင်းယှဉ်ထပ်ခါတလဲလဲလိင်မှအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် dorsal anterior cingulate (dACC) လှုပ်ရှားမှုကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှိုင်းယှဉ် (CSB) ဘာသာရပ်များ (HV) ၏လေ့။ အဆိုပါပုံစမ်းသပ်မှုတွေ၏ပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးဝက်များ၏နှိုင်းယှဉ်ပြသည်။ C။ slac နှင့် dACC လေ့၏ကြားဖြတ်။ CSB နှင့် HV တစ် ဦး ချင်းစီရှိ dACC ၏ beta တန်ဖိုးများ၏ဘယ်ဘက်စောင်းသို့မဟုတ်အတိုင်းအတာအတိုင်းအတာနှင့် CSB ၏ကြားဖြတ်သို့မဟုတ်ကန ဦး လှုပ်ရှားမှုသည်လိင် - ကြားနေရေး (လိင်) နှင့်ငွေကြေး - ကြားနေ (HV) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် CSB ၏ကြားဖြတ်သို့မဟုတ်ကန ဦး လုပ်ဆောင်မှုကိုပြသသည်။ ငွေ) ရုပ်ပုံများ။ * Valence နှင့် Group-by-Valence သက်ရောက်မှုများ p <0.05; ** Valence အကျိုးသက်ရောက်မှု p <0.05 ။
ဘာသာရပ်ဝိသေသလက္ခဏာများလွတ်လပ်သော t-tests သို့မဟုတ် Chi Square ကိုအသုံးပြု။ ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ ဝေးလံခေါင်ဖျားသူများအတွက် (ဒေတာအုပ်စု ၃ ခုမှ> ၃ SD) အတွက်ဒေတာများကိုစစ်ဆေးပြီးပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးခြင်း (Shapiro Wilks test) ကိုစစ်ဆေးသည်။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်အေးစက်တည်ငြိမ်သောလုပ်ငန်းများအတွက်စမ်းသပ်မှုအားလုံးတွင်ပျမ်းမျှရွေးချယ်မှု ဦး စားပေးမှုကို ANOVA ကိုရောနှောထားသောအတိုင်းအတာများအရအုပ်စု၏ဘာသာရပ်များ (CSB, HV) နှင့် Valence (အတွင်းပိုင်း - ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအချက်များ (Sexual, Control3, Control1; CS +, CS-) ဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ။ ပထမ ဦး ဆုံးစမ်းသပ်မှုအတွက်ရွေးချယ်မှုများကို Chi-Square စမ်းသပ်မှုများနှင့်လည်းဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ : P <2 သိသိသာသာထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်။
imaging data တွေကိုရှာမှီး
သင်တန်းသားများကိုတစ်ဦး 3-ရုပ်သံလိုင်းခေါင်းကိုကွိုင်နှင့်တကွ, Wolfson ဦးနှောက် Imaging စင်တာ, ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ကတစ် 32T Siemens Magnetom TimTrio ကင်နာအတွက် scan ဖတ်ခဲ့ကြသည်။ (TR = 1 ms; TE = 2300 ms; FOV 2.98 x ကို 240 x ကို 256 မီလီမီတာ, voxel အရွယ်အစား 176x1x1 မီလီမီတာ) ခန္ဓာဗေဒပုံရိပ်တွေတစ်ခု MPRAGE sequence ကိုသုံးပြီး T1 မာန်တင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပုံရိပ်ကိုသုံးပြီးရယူခဲ့ကြသည်။ fMRI ဒေတာကိုအောက်ပါ parameters တွေကိုနှင့်အတူမြေတပြင်လုံး-ဦးနှောက်ပဲ့တင်သံ-ပြိုပုံရိပ် (EPI) နှိုငျးယှဉျသောအသွေးကိုအောက်ဆီဂျင်အဆင့်ကို-မှီခို (BOLD) ကို အသုံးပြု. ဝယ်ယူခဲ့ကြသည်: 39, အသံအတိုးအကျယ်နှုန်း axial ချပ် interleaved TR 2.32့TA 2.26, TE 33 ms, 3mm အချပ်ထူ ။
ဒေတာကိုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းစာရင်းအင်း parametric မြေပုံဆော့ဖ်ဝဲကို (SPM 8) ကို အသုံးပြု. ကောက်ယူခဲ့ကြသည် (http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm) ။ pre-အပြောင်းအလဲနဲ့အချပ်အချိန်ဆုံးမခြင်း, Spatial ရှိမယ်, ထိုဘာသာရပ်များ '' T1 မာန်တင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပုံများ, ပုံမှန်နှင့် Spatial တင်ပါသည် (8 မီလီမီတာ၏ထက်ဝက်-အများဆုံးမှာ Full-width ကို) နဲ့ coregistration ပါဝင်သည်။ တစ်ဦးချင်းစီ session ရဲ့ပထမဦးဆုံး4volumes ကို T1-equilibration သက်ရောက်မှုများအတွက်ခွင့်ပြုစွန့်ပစ်ခဲ့ကြသည်။
imaging data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအားလုံး3အမျိုးအစားများအတွက်သီးခြားအေးစက်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ရလဒ်နှစ်ခုလုံးကိုများအတွက်အေးစက်နှင့်မျိုးသုဉ်းအဆင့်မော်ဒယ်အထွေထွေ-linear-မော်ဒယ် (GLM) ကို အသုံးပြု. ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ ရှိမယ်, parameters တွေကိုရွေ့လျားမှုရှေးဟောင်းပစ္စည်းများအတွက်ပြင်ဆင်ရန်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ အသုံးပြုတဲ့သုဉ်းအဆင့်အတွက်ရလဒ်ပျက်ကွက်၏စတင်ခြင်း၏အချိန် 1500 တစ် 500 msec ကြာချိန်နှင့်အတူစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုစတင်ခြင်း (သို့မဟုတ်အကျိုးရလဒ်သည်အေးစက်အဆင့်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့ကြလို့မှာအချိန်) အပြီး msec ဖြစ်ခဲ့သည်။
တစ်ဦးချင်းစီအခွအေနေအဘို့, အေးစက်လှုံ့ဆော်မှု (CS + လိင်, CS + ငွေ, CS-) ကိုအေးစက်ခြင်းနှင့်မျိုးသုဉ်းအဆင့်အဘို့နှင့်လည်းသုဉ်းအဆင့်အတွက်ရလဒ်များအတွက်သီးခြားစမ်းသပ်မှုတွေကိုဖြတ်ပြီးပျမ်းမျှခဲ့ကြသည်။ နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောလှုံ့ဆော်မှုအတူတူခွအေနအေအတွင်းပျမ်းမျှခဲ့ကြသည်။ ဒုတိယအဆင့်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတှငျကြှနျုပျတို့အပြည့်အဝ factorial ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပျမ်းမျှစမ်းသပ်မှုတွေအဘို့အုပ်စု, valence နှင့်ဆက်သွယ်မှုသည်နှိုင်းယှဉ် (ထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံ ANOVA) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှု၏ပုံရိပ်တာဝန်နှင့်ဖော်ပြချက်၏မတူညီသောအဆင့်ထပ်မံအတွက်သရုပ်ဖော်နေသည် ပုံ 4.
အေးစက်, လေ့နှင့်မျိုးသုဉ်း၏ပုံဥပမာဒီကိန်းဂဏန်းဟာအေးစက်လှုံ့ဆော်မှုရလဒ်များ (ဒီမှာပြ CS + လိင်နှင့်အတူတွဲထားတဲ့အတွက်ပုံရိပ်တာဝန်များ၏အဆင့်သရုပ်ဖော်; ကြားနေရလဒ်များမှအေးစက်ငွေကြေးဆိုင်ရာရလဒ်များနှင့် CS- မှအေးစက် CS + ပိုက်ဆံကျပန်းလက်ဆွဲယောက် ပြသ) နှင့်သာအေးစက်လှုံ့ဆော်မှုရလဒ်ကိုမပါဘဲပြသထားသည့်အတွက်မျိုးသုဉ်းအဆင့်ကြသည်မဟုတ်။ တစ်ဦးချင်းစီရလဒ်ကိုအမျိုးအစားသို့မဟုတ် CS- နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသော CS + လှုံ့ဆော်မှုနှုန်း 20 စမ်းသပ်မှုတွေကျော်အေးစက်ခဲ့သည်။ (အမျိုးသမီးချောင်းကိုပုံ၏မတူညီသောအရောင်များနှင့်အတူဒီနေရာမှာဖော်ပြထားတဲ့) ငါးကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေကျပန်းနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသော CS + လိင်နှင့်အတူတွဲခဲ့ကြခြင်းနှင့်အသီးအသီး 8 ကြိမ်ပြသခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါလေ့ဆန်းစစ်ဘို့ဤထပ်ခါတလဲလဲရလဒ်များကာလ၌အပြောင်းအလဲကိုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါအေးစက်အဆင့်အတွက်ရလဒ်များ၏လေ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့, ငါတို့ပထမ ဦး ဆုံးအဆင့်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်လိင်နှင့်ကြားနေရလဒ်များ၏ပထမနှင့်နောက်ဆုံးတစ်ဝက်များအတွက် regressors ဖန်တီးခဲ့သည်။ CS + လိင်စမ်းသပ်မှုနှစ်ခုလုံးတွင်ဘာသာရပ်များကိုလိင်ကွဲပြားမှုဆိုင်ရာပုံရိပ် ၅ ခုဖြင့် ၈ ကြိမ်ပြသခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပုံများအတွက်ပထမတစ်ဝက်သည်ကွဲပြားသောပုံရိပ် ၅ ခုနှင့်နောက်ဆုံးတစ်ဝက်တွင်ပထမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံဖော်မှု ၄ ခုနှင့်ကွဲပြားသောပုံရိပ် ၅ ခုအနက်တစ်ခုစီအတွက်နောက်ဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံဖော်ခြင်းနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဒုတိယအဆင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်အချက်အလက်အပြည့်အစုံကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကြားနေမှုရလဒ်များ၏ပထမနှင့်နောက်ဆုံးတစ်ဝက်တွင်အုပ်စု၏အကြား - အကြောင်းအရာအချက်နှင့် Valence နှင့် Time တို့၏အကြောင်းအရာများကိုနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ အားလုံးအထက်ပါဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအဘို့, တပြင်လုံးကို ဦး နှောက်စပျစ်သီးပြွတ် FWE p <5 သိသိသာသာထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်တညျ့။
dACC တွင် Group x Valence x Time အကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးသောအခါတစ် ဦး ချင်းစီအတွက် beta တန်ဖိုးများကိုစမ်းသပ်ထုတ်ယူရန်အတွက် SPM Toolbox MarsBaR (MARSeille Boite A Region d'Interet) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။5မီလီမီတာ၏ dACC ဗဟိုကိုသြဒီနိတ်နှင့်အချင်းဝက်။ ပထမအဆင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြောင်းလဲမှုကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန် regressors များကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက် Regressor (၈) ခုကို ၈ ကြိမ်ပြထားသည့်လိင်မှုဆိုင်ရာရလဒ်များပါဝင်သည်။ တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်ရလဒ် ၃ ခုစီ၏ slope နှင့် intercept points ကိုကျွန်ုပ်တို့တွက်ချက်သည်။ ဆင်ခြေလျှောနှင့်ကြားဖြတ်မှတ်များကိုသီးခြားစီရောထွေးပြီး ANOVA ကို Group - အကြား - ဘာသာရပ်အချက်နှင့် Valence ကိုအတွင်း - ဘာသာရပ်အချက်အဖြစ်နှိုင်းယှဉ်သည်။ : P <8 သိသိသာသာထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်။
အလားတူစွာပင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဇီဝကမ္မဗေဒဆိုင်ရာအပြန်အလှန်လေ့လာမှုကို dACC ဒေသအကျိုးစီးပွား (ROI) အမျိုးအနွယ်နှင့်အတူအစောပိုင်းကာလများနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုရလဒ်များနှင့်ထိတွေ့မှုနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ အားလုံးဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်, မိသားစုပညာအမှား (FWE) အထက် - activation တပြင်လုံးကို - ဦး နှောက် p <0.05 နှင့်5တဆက်တည်း voxels တညျ့သိသိသာသာထည့်သွင်းစဉ်းစားတညျ့။ ကျနော်တို့နောက်ထပ်အာရုံစိုက်လေ့လာမှုအကျိုးစီးပွားဒေသခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ တစ်ဦး မျိုးစုံ ROI နှိုင်းယှဉ် (p <0.0125) အတွက် Bonferroni ဆုံးမခြင်းနှင့်အတူ WFU PickAtlas သေးငယ်တဲ့အသံအတိုးအကျယ်ဆုံးမခြင်း (SVC) FWE- တညျ့အသုံးပြုဒေသများ။
အဆိုပါ CSB နှင့် HVs ၏ဝိသေသလက္ခဏာများအစီရင်ခံကြသည် စားပွဲတင် 1.
စားပွဲတင် 1Subject ဝိသေသလက္ခဏာများ။
T က / Chi စတုရန်း
ဂဏန်း 22 40
အသက်အရွယ် 25.14 (4.68) 25.20 (6.62) 0.037 0.970
Abstinence (ရက်) 32 (28.41)
ပညာရေး အထက်တန်းကျောင်း 22 40 0.000 1.000
လက်ရှိ Univ ။613 0.182 0.777
ကောလိပ်ဒီဂရီ35 0.039 1.000
Univ ။ တက်ရောက်914 0.212 0.784
မဟာဘွဲ့63 4.472 0.057
relationship status ကို တခုတည်းသော 10 16 0.173 0.790
Curr ။ ကြားဆက်ဆံရေး716 0.407 0.591
အိမ်ထောင်သည်58 0.064 1.000
အလုပ်အကိုင် ကြောငျးသား715 0.200 0.784
အချိန်ပိုင်းအလုပ်32 1.428 0.337
အချိန်ပြည့်အလုပ် 12 21 0.024 1.000
အလုပ်လက်မဲ့သော02 1.137 0.535
ဆေးဝါးများ စိတ်မကျဆေး Antidepressants 2
လက်ရှိဆေးလိပ်သောက် status ကို ဆေးလိပ်သောက်သူများ01
ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်း 24.91 (3.64) 23.19 (4.38) 1.566 0.122
Bing စား ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသော 6.91 (6.46) 5.72 (6.17) 0.715 0.478
အရက်ကိုအသုံးပြုခြင်း နားထောင်ခြင်း 7.13 (4.11) 6.29 (3.41) 0.862 0.392
စီးပွားပျက်ကပ် BDI 11.03 (9.81) 5.38 (4.89) 3.039 0.004
စိုးရိမ်ခြင်း SSAI 44.59 (13.19) 36.15 (13.29) 2.370 0.021
Stay 49.54 (13.91) 38.23 (14.57) 2.971 0.004
obsessive compulsive OCI-R ကို 19.23 (17.38) 12.29 (11.72) 1.872 0.067
ထကြွလွယ်သော UPPS-P ကို 150.83 (17.95) 130.26 (23.49) 3.569
အတိုကောက်: compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူ CSB = ဘာသာရပ်များ; = ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်း HV; ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသော = Bing စားစကေး; စာရင်းစစ် = အရက်အသုံးပြုမှု Disorders သတ်မှတ်ခြင်းစမ်းသပ်ခြင်း; BDI = Beck စီးပွားပျက်ကပ် Inventory; SSAI / Stay = Speilberger ပြည်နယ်နှင့်စရိုက်များတော့ပူပန် Inventory; OCI-R = obsessive compulsive Inventory; UPPS-P ကို ​​= UPPS Impulse အပြုအမူစကေး
20 စမ်းသပ်မှုတွေဖြတ်ပြီးပျမ်းမျှရွေးချယ်မှု preference ကို, အ valence အကျိုးသက်ရောက်မှု (F (1,59) = 2.89, p = 0.065) နှင့်တစ်ဦးအုပ်စု-by-valence အပြန်အလှန် (F (2,59) = 3.46, p = 0.035) ဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့လမ်းကြောင်းရှိခဲ့ပါသည်နှင့် အဘယ်သူမျှမ Group မှအကျိုးသက်ရောက်မှု (F (1,60) = 1.47, p = 0.230) (ပုံ 1တစ်ဦးက) ။ အဆိုပါအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုပေးထားကျနော်တို့ Post-hoc ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း, HV Control2 (p = 0.039) သာရှိပြီးပြည်ပမှ Control1 အဘို့ သာ. ကြီးမြတ်အသစ်အဆန်း preference ကိုရှိခဲ့သော်လည်း CSB ဘာသာရပ်များ Control2 (p = 0.024) သာရှိပြီးပြည်ပမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဘို့ သာ. ကြီးမြတ်အသစ်အဆန်း preference ကိုရှိခဲ့ကွောငျးဖျောပွခဲ့သည့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
လိင်, ထိန်းချုပ်ရေး 1, ထိန်းချုပ်ရေး 2: HV: CSB ဘာသာရပ်များအကျွမ်းတဝင်ကြားနေလှုံ့ဆော်မှု (ပထမရွေးချယ်မှုဝတ္ထု၏ရာခိုင်နှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါတ္ထုကိုရွေးချယ်ဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်ပေမယ့်, ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုများအတွက်ရွေးချယ်မှု preference ကိုများအတွက် 51.6%, 58.1%, 38.7%; CSB: 50.0%, 44.4%, 22.2%) မျှအရေးပါသောအုပ်စုသည်ကွဲပြားခြားနားမှု (လိင်, Control1, Control2 ရှိခဲ့သည်: Chi-စတုရန်း = 0.012, 0.357, 0.235 p = 0.541, 0.266, 0.193) ။
အကျဉ်းချုပ်ထဲမှာ, CSB ဘာသာရပ်များ HVs ကြားနေအရာဝတ္ထုပုံရိပ်တွေမှဆွေမျိုးကြားနေလူ့အမျိုးသမီးပုံရိပ်တွေများအတွက်ဝတ္ထုရွေးချယ်မှုရွေးချယ်ဖို့ကပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်သော်လည်းကြားနေအရာဝတ္ထုပုံရိပ်တွေမှဆွေမျိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေများအတွက်အကျွမ်းတဝင်ရွေးချယ်မှုကျော်ဝတ္ထုရွေးချယ်ဖို့ကပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။
20 စမ်းသပ်မှုတွေကျော်ပျမ်းမျှရွေးချယ်မှု preference ကို, အ valence အကျိုးသက်ရောက်မှု (F (1,60) = 5.413, p = 0.024) နှင့်တစ်ဦးအုပ်စု-by-valence အကျိုးသက်ရောက်မှုရသော CSB ဘာသာရပ်များ (F (1,60) = 4.566, p = 0.037) ရှိခဲ့ HVs (နှိုင်းယှဉ် CS- နှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ CS + လိင်ကိုရွေးဖို့ကပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်ပုံ 1B က) ။ အဘယ်သူမျှမ Group မှအကျိုးသက်ရောက်မှု (F (1,60) = 0.047, p = 0.830) ရှိခဲ့သည်။ CSB ဘာသာရပ်များ HVs (p = 0.005) ကို CS- (p = 0.873) သာရှိပြီးပြည်ပမှအဆိုပါ CS + လိင်ကိုရွေးဖို့ကပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်မဟုတ်။ တစ်ဦးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်အဖြစ်ကျနော်တို့လေ့လာဆန်းစစ် Post-hoc ထပ်မံကောက်ယူ ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုများအတွက်ရွေးချယ်မှု preference ကိုအဘို့, အုပ်စုများအကြားအဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှု (ပထမရွေးချယ်မှု CS + လိင်ရာခိုင်နှုန်း: HV: 64.5%, CSB: 72.2%; Chi-စတုရန်း = 0.308, p = 0.410) ရှိခဲ့သည်။
20 စမ်းသပ်မှုတွေကျော်ပျမ်းမျှရွေးချယ်မှု preference ကိုအဘို့, valence (F (1,60) = 1.450, p = 0.235) သို့မဟုတ်အုပ်စု (F (1,60) = 1.165, p = 0.287) ၏အဘယ်သူမျှမအရေးပါသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။ တစ်ဦးအုပ်စု-by-valence အကျိုးသက်ရောက်မှု (F (1,60) = 4.761, p = 0.035) ရှိခဲ့သည် (ပုံ 1B က) ။ ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှုများအတွက်ရွေးချယ်မှု preference ကိုအဘို့, အုပ်စုများအကြားအဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှု (ပထမရွေးချယ်မှု CS + ငွေရာခိုင်နှုန်း: HV: 48.4%, CSB: 66.7%; Chi-စတုရန်း = 1.538 p = 0.173) ရှိခဲ့သည်။
CSB ဘာသာရပ်များ (ဆွဲဆောင်မှုရမှတ် 8.35, SD က 1.49) HVs မှဆွေမျိုးအားလုံးအမျိုးသမီးပုံများကိုဆွဲဆောင်မှုအလားတူ ratings ခဲ့ (8.13, SD က 1.45; t ကို = 0.566, p = 0.573) ။
ထို့ကြောင့် CSB ဘာသာရပ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေသို့မဟုတ်ပိုက်ဆံဖြစ်စေရန်အေးစက်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက် သာ. ကြီးမြတ် preference ကိုခဲ့ရသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှပိုကောင်းအာရုံကိုဘက်လိုက်မှု (Mechelmans, Irvine, 2014) နှင့်အသစ်အဆန်းသို့မဟုတ် CS + လိင်များအတွက်ကနဦးရှေးခယျြမှု preference ကို၏လက်ရှိတွေ့ရှိချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်ကထုတ်ဝေတွေ့ရှိချက်များအကြားမည်သည့်ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ကနောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေး။ ကျနော်တို့ CS + လိင်နှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ CS- ကို ရွေးချယ်. နှင့် Novell လှုံ့ဆော်မှုနှိုင်းယှဉ်သီးခြားစီအကျွမ်းတဝင်တဲ့သူဘာသာရပ်များအဘို့ရှေးခယျြမှု preference ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြားနေပုံရိပ်တွေနှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဘို့အအစောပိုင်းအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုအကဲဖြတ်လွတ်လပ်သော t-စမ်းသပ်မှုအသုံးပြုခြင်း။ နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီး, အ CS- ရှေးခယျြခဲ့တဲ့သူတွေကိုနှိုင်းယှဉ်အဖြစ် CS + လိင်ရှေးခယျြခဲ့သူကိုဘာသာရပ်များကြားနေလှုံ့ဆော်မှုနှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဘို့အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုတိုးမြှင့်ခဲ့သည် (t = -2.05, p = 0.044) ။ ဆနျ့ကငျြဘမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဘို့အကျွမ်းတဝင်နှင့်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုရမှတ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအတိုင်းဝတ္ထုကို ရွေးချယ်. သူကိုဘာသာရပ်များအကြားမျှမကစာရင်းအင်းသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက် (t = 0.751, p = 0.458) ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါရှိခဲ့ပါသည် (ပုံ 2).
ကျနော်တို့ပထမ ဦး ဆုံးစမ်းသပ်မှုအားလုံးဖြတ်ပြီးပျမ်းမျှ cue- အေးစက်အကဲဖြတ်။ အုပ်စုအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ ကြားနေ (CS-) လှုံ့ဆော်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကငွေ (CS + မွန်) နှင့်လိင် (CS + လိင်) ကိုအေးစက်စေသောလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းကိုခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ cortex တွင်အောက်ပါ p-တန်ဖိုးများနှင့်ပိုမိုဆက်စပ်မှုရှိသည့် Valence အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည် ဦး နှောက်အစုအဝေးတစ်ခုလုံး FWE p <0.05: Montreal Neurological Institute ၏သြဒီနိတ်တွင်အမြင့်ဆုံးစပျစ်သီးပြွတ်ကိုပြုပြင်သည်။ မီလီမီတာတွင် XYZ - -6 -88 -6၊ Cluster အရွယ်အစား = ၃၉၄၈၊ ဦး နှောက်တစ်ခုလုံး FWE p <3948)၊ ဘယ်ဘက်ရှိမော်တာ Cortex (XYZ = - 0.0001 -34 24, Cluster အရွယ်အစား = ၅၅၁၈၊ ဦး နှောက်တစ်ခုလုံး FWE p <52) နှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော putamen (ဘယ်ဘက်: XYZ = -5518 -0.0001 24, Cluster အရွယ်အစား = 2၊ ဦး နှောက်တစ်ခုလုံး FWE p <4; ညာဘက် - XYZ = 338 0.0001 24) , စပျစ်သီးပြွတ်အရွယ်အစား = 4, FWE p <2) နှင့် thalamus (XYZ = -448 -0.0001 0, စပျစ်သီးပြွတ်အရွယ်အစား = 22, p <0) လှုပ်ရှားမှု။ အဘယ်သူမျှမ Group-by-Valence အပြန်အလှန်ရှိခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ထို့နောက်အေးစက်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ Extinction အဆင့်အကဲဖြတ်။ CS + လိင်နှင့် CS + မွန်နှင့် CS- ထိတွေ့မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက Valence အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ပိုမိုကြီးထွားလာသောသန္ဓေသားလောင်းလှုပ်ရှားမှု (XYZ = -10 -94 2၊ Cluster size = 2172, ဦး နှောက်တစ်ခုလုံး FWE p <0.0001) နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အဘယ်သူမျှမ Group မှသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။
မည်သည့်ဒေသများတွင်အုပ်စုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် HVs နှိုင်းယှဉ် CSB ဘာသာရပ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များမှလှုပ်ရှားမှုတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောကျဆင်းခြင်းခဲ့လျှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်အဆန်းဖို့လေ့၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးနှိုင်းယှဉ်အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်၏ပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးဝက်၏ valence x ကိုအချိန်အပြန်အလှန် x ကြားနေရလဒ်ကိုအဆင့်။ CSB ဘာသာရပ်များအချိန်ကျော် (XYZ =018 36, Cluster အရွယ်အစား = 391, မြေတပြင်လုံးသည်ဦးနှောက် FWE p = 0.02) နှင့်ညာဘက်ယုတ်ညံ့ယာယီ cortex (XYZ = 54 -36 -4, Cluster dorsal anterior cingulate cortex (dACC) လှုပ်ရှားမှုပိုမိုလျော့နည်းသွားခဲ့ HVs နှိုင်းယှဉ်ကြားနေရလဒ်များသာရှိပြီးပြည်ပမှအရွယ်အစား = 184, မြေတပြင်လုံးသည်ဦးနှောက် FWE p = 0.04) လိင်မှ (ပုံ 3ခ)
ကျနော်တို့ထို့နောက်ရုံးတင်စစ်ဆေး-by-ရုံးတင်စစ်ဆေး beta ကိုတန်ဖိုးများကို, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့နှင့်ကြားနေရလဒ်များများအတွက် dACC အာရုံစိုက်ထုတ်ယူ။ ကြားနေနှင့်ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ - - ကျနော်တို့လိင်နှိုင်းယှဉ် (ထိတွေ့မှု initial မှဆိုလိုသည်မှာလှုပ်ရှားမှု) ကိုတောင်စောင်း (လေ့၏ဆိုလိုသည်မှာဒီဂရီ) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါနှင့်ကြားဖြတ်မှတ်ကြားနေရလဒ်များ (ကိန်းဂဏန်းများ 3ကို C) ​​။ အဆိုပါဆင်ခြေလျှောအဘို့, valence (F (1,36) = 6.310, p = 0.017) နှင့်တစ်ဦးအုပ်စု-by-valence အပြန်အလှန် (F (1,36) = 6.288, p = 0.017) ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။ တစ်ဦးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်အဖြစ်ကျနော်တို့ Post-hoc ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကောက်ယူ: CSB အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များမှ dACC ဆင်ခြေလျှောတစ်ဦးကမ်းပါးမတ်ကျဆင်းခြင်းငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရလဒ်များ (F ကို = 4.159, ရန်မကွဲပြားမှုနှင့်အတူ HVs (F ကို = 0.049, p = 0.552) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါရှိခဲ့သည် p = 0.463) ။ အုပ်စု (F (1,36) = 2.135, p = 0.153) ၏အဘယ်သူမျှမအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါကြားဖြတ်တန်ဖိုးကိုအဘို့, valence (F (1,36) = 11.527, p = 0.002) ပေမယ့်အုပ်စု (F (1,36) = 0.913, p = 0.346) သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု (F (1,36) ၏အဘယ်သူမျှမအဓိကအကျိုးသက်ရောက်တဲ့အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည် = 2.067, p = 0.159) ။ အဆိုပါအေးစက်နှင့်ရလဒ်ကိုအဆင့်အကြားမျှဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်စမ်းသပ်မှုတွေဖြတ်ပြီး Extinction အဆင့်စဉ်အတွင်းရလဒ်များ၏ပျက်ကွက်အကဲဖြတ်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ ventral striatal လှုပ်ရှားမှုတစ်အနုတ်လက္ခဏာခန့်မှန်းအမှားနှင့်ကိုက်ညီယခင်ကကြိုးရလာဒ်မှရလဒ်ကိုပျက်ကွက်နေစဉ်အတွင်းလျော့နည်းသွားခဲ့ကွောငျးဟာအလွန်တိကျတဲ့ခန့်မှန်းခဲ့ရပါတယ်။ အနိမ့်လက်ျာဘက် ventral striatal လှုပ်ရှားမှုကြားနေရလဒ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်နှင့်ငွေကြေးရလဒ်များ၏မရှိခြင်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည့်အတွက် valence တစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှု ((XYZ28 -10, Z ကို = 3.59, SVC FWE p = 0.036 တညျ့) ရှိခဲ့သည်ပုံ 5တစ်ဦးက) ။ အဘယ်သူမျှမ Group မှသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်။ လိင်နှင့်ငွေကြေးရလဒ်များအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုရှိခဲ့သည်။
မျိုးသုဉ်းခြင်းနှင့် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု. မျိုးသုဉ်းနေစဉ်အတွင်းရလဒ်ကို၏အေပျက်ကွက်။ မျိုးသုဉ်းစဉ်ကာလအတွင်းလိင်နှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာရလဒ်များမမျှော်လင့်ဘဲချန်လှပ်ထားခြင်းအတွက်အုပ်စုနှစ်ခုလုံးတွင်မှန်ကန်သော ventral striatal လုပ်ဆောင်မှု (Valence effect: p <0.05) ။ ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုနှင့်အတူခ Functional ဆက်သွယ်မှု။ အတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ (CSB) နှင့်ကျန်းမာသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ (HV) တစ် ဦး ချင်းစီ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြန်အလှန်အကျိုးပြုမှုသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များနှောင်းပိုင်းနှင့်ထိတွေ့ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အစာအိမ် cingulate မျိုးစေ့နှင့်ညာဘက် ventral striatum (ဘယ်ဘက်) နှင့်နှစ်နိုင်ငံနှစ်ဖက်ရှိ hippocampus နှင့်အလုပ်လုပ်ပုံကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ * p <0.05; ** p <0.005 ။
dorsal cingulate ၏ functional ဆက်သွယ်မှု
နှောင်းပိုင်းတွင်ထိတွေ့မှုသာရှိပြီးပြည်ပမှအစောပိုင်းခြားနားသည့် dACC ၏ psychophysiological အပြန်အလှန်သုံးပြီး functional ဆက်သွယ်မှုအဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များ၏ (ထိုနောက်ဆုံး2စမ်းသပ်မှုတွေသာရှိပြီးပြည်ပမှပထမဦးဆုံး2စမ်းသပ်မှုတွေ) ကိုလည်းအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ HVs အတွက် သာ. ကြီးမြတ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုပု dACC နှင့်ညာဘက် ventral striatum (XYZ = 18 20 -8 မီလီမီတာ, Z ကို = 3.11, SVC FWE-တညျ့ p = 0.027) နှင့်နှစ်နိုင်ငံ hippocampus အကြားနှောင်းပိုင်းတွင်စမ်းသပ်မှုတွေနှိုင်းယှဉ်အစောပိုင်းအတွင်း CSB ဘာသာရပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါရှိခဲ့သည် (ညာ: XYZ = 32 -34 -8, Z ကို = 3.68, SVC FWE-တညျ့ p = 0.003; လက်ဝဲ: XYZ = -26 -38 04, Z ကို = 3.65 SVC FWE-တညျ့ p = 0.003) (ပုံ 5B က) ။ ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းအစောပိုင်းထိတွေ့မှုပိုမို functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုရှိခဲ့သော်လည်းထို့ကြောင့် CSB ဘာသာရပ်များနှောင်းပိုင်းတွင်ထိတွေ့တွင်ဤဒေသများအကြား သာ. ကြီးမြတ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။
Pearson ဆက်စပ်မှုကို အသုံးပြု. Control2 - လိင်အဘို့အအသစ်အဆန်း preference ကိုအတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်ကို၏ dACC လေ့အကြားဆက်ဆံရေး (ဆင်ခြေလျှော) ရှိခဲ့လျှင်ကျနော်တို့စုံစမ်းစစ်ဆေး။ ဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီး, Control2 ပုံရိပ်တွေနှိုင်းယှဉ်လိင်များအတွက်အသစ်အဆန်း preference ကိုအဆိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေများအတွက်ဆင်ခြေလျှောဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည် (r = -0.404, p = 0.037) ။ ထို့ကြောင့် သာ. ကြီးမြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်အဆန်း preference ကိုပိုပြီးအပျက်သဘောဆင်ခြေလျှောသို့မဟုတ် သာ. ကြီးမြတ် dACC လေ့ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ CSB ဘာသာရပ်များဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအဘို့နှင့်ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းနှိုင်းယှဉ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှစ်ဦးစလုံးမှအေးစက်တွေကိုအဘို့ သာ. ကွီးမွတျရှေးခယျြမှု preference ကိုရှိခဲ့ကြောင်းပြသပါ။ CSB ဘာသာရပ်များလည်းငွေကြေးဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေနှိုင်းယှဉ်ထပ်ခါတလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှ dACC လှုပ်ရှားမှုပိုမိုလေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ dACC လေ့၏ဒီဂရီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေအဘို့ သာ. ကြီးမြတ်အသစ်အဆန်း preference ကိုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုကတစ် dACC- (ventral striatal) -amygdalar ကွန်ယက်ကို implicating CSB အတွက်အကဲဆတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုဆီသို့တိုးမြှင်အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု (Mechelmans, Irvine, 2014) နှင့် cue reactivity ကို (Voon, မှဲ့, 2014) ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်တွေ့ရှိချက်အပေါ်တည်ဆောက်။ ဤတွင်ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုစောစောအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုက dot-စုံစမ်းစစ်ဆေးတာဝန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေပေမယ့်အသစ်အဆန်းမဟုတ် preference ကိုမှအေးစက်တွေကိုဦးတည် သာ. ကြီးချဉ်းကပ်အပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်သုံးပြီးအကဲဖြတ်ကြောင်းပြသပါ။ ထို့ကြောင့်တွေ့ရှိချက်ဖြစ်နိုင်သောယန္တရားများ CSB ဘာသာရပ်များအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုစောစောအာရုံကိုဘက်လိုက်မှုအခြေခံကြောင်းညွှန်ပြနီးကပ်စွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Conditions တွေကိုဦးတည် cue-အေးစက်နှင့်တိုးမြှင်ချဉ်းကပ်အပြုအမူတွေနှင့်အတူ aligned နေကြပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့အသစ်အဆန်း preference ကိုလည်း CSB ဘာသာရပ်များအတွက်တိုးမြှင့်သော်လည်း, ဒီအပြုအမူအစောပိုင်းအာရုံကိုဘက်လိုက်မှု၏လေ့လာရေးမသက်ဆိုင်သောဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်လေ့လာရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဆီသို့အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံ-ရှာကြံ (Kagerer, Wehrum, 2014) အကြားတစ်ဦးနှင့်စပ်လျဉ်းပြသပေးသောကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည်ယခင်လေ့လာမှုနှင့်အတူခြားနားနေသည်။ ဒါဟာရောဂါဗေဒနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် cue-အေးစက်၏ကြီးမြတ်သောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုများကရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါသည်။
ဆုလာဘ်နှစ်ခုစလုံးပုံစံများကိုဖြတ်ပြီး conditional လှုံ့ဆော်မှုအဘို့ဤမြှင့်တင်ရန် preference ကို (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်) CSB ဘာသာရပ်များ သာ. ကြီးမြတ်ဆုလာဘ် sensitivity ကိုသို့မဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်နှင့်အလားတူလှုံ့ဆော်မှု (Mazur, 2002) အကြားအေးစက်၏သက်ရောက်မှု၏အပြောင်းအရွှေ့ရှိသည်ဖြစ်စေအကြံပြုထားသည်။ ဤဖြစ်စဉ် dopaminergic ယန္တရားများပါဝင်မှအဆိုပြုထားထိုကဲ့သို့သောလိင်သဘာဝဆုလာဘ်၏စိတ်ကြွဆေးနှင့်မက်လုံးဂုဏ်သတ္တိများအကြားကြွက်လေ့လာမှုများအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာအပြုအမူလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive နှင့်အညီဖြစ်ပါသည် (Fiorino နှင့် Phillips က, 1999, Frohmader et al ။ , 2011) ။ ကနဦးလေ့လာမှုများဒီလူဦးရေအတွက်ငွေကြေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်မှ (Sescousse et al ။ , 2013) differential ကိုအာရုံကြော activation ပုံစံများအကြံပြုသကဲ့သို့လောင်းကစားရောဂါကဲ့သို့အခြား Non-ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလမ်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီတို့အားဤသို့သောစုံစမ်းချဉ်းကပ်လျှောက်ထားခြင်းမျက်ခြေမပြတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ကြှနျုပျတို့သညျဤ cue-အေးစက်၏အခြေအနေတွင်အကဲဖြတ်ကြောင့်တွေကိုရလဒ်များနှင့်အတူတွဲထားတဲ့ကာလအတွင်းတဦးတည်းသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်အခြေခံဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေခြင်းငှါ, ထပ်ခါတလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှလှုပ်ရှားမှုအတွင်းလျော့နည်းသွားရှင်းပြဖို့ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေ့ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပေမယ့် အဆိုပါမမျှော်လင့်ဘဲဆုလာဘ်မှ dopaminergic လှုပ်ရှားမှုအေးစက်နှင့်အတူ cue ဆီသို့ပြောင်းရွှေ့ရသည်နှင့်အရှင်ဆုလာဘ်ရလဒ်ကိုအဖြစ်လှုပ်ရှားမှုမျှော်မှန်းထားသည်ဖြစ်ကြောင်းထိုကဲ့သို့သောအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလျော့ကျရသော cue-အေးစက်အချိန်ကျော် (Schultz, 1998) လျော့ကျပါလိမ့်မယ်။ သို့သျောလညျး, (ဈ) အဖြစ်ကျနော်တို့က5လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်မှအေးစက်နှစ်ခုလှုံ့ဆော်မှုကိုဖြတ်ပြီး 8 ကြိမ်ထပ်ခါတလဲလဲ randomized; (ii) ကြှနျုပျတို့အေးစက် preference ကိုအတူထပ်ခါတလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ dACC လှုပ်ရှားမှုအတွင်းကျဆင်းခြင်းများအကြားမည်သည့်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုစောငျ့ရှောကျမပြုခဲ့ပေမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်အဆန်း preference ကိုနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုစောငျ့ရှောကျခဲ့ဘူး, (iii) အေးစက်တွေကိုမှပုံရိပ်ရလဒ်များမအုပျစုကှဲပွားခွားနားနှင့်မျှမတို့သက်သေအထောက်အထားရှိခဲ့သည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်မှတိကျတဲ့တိုးမြှင့်အေးစက်ခြင်း, CSB ဘာသာရပ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်မှအေးစက်နှစ်ဦးစလုံးလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ဦးစားပေးခဲ့ (ဃ), ကျနော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတစ်ဦးလေ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ကိုက်ညီဖြစ်နိုင်သည်အကြံပြုခဲ့ကြသည်။
ကျနော်တို့နောက်ထပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်များမမျှော်လင့်ဘဲမရှိခြင်းအားလုံးဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီးအောက်ပိုင်းညာဘက် ventral-striatal လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းပြသပါ။ ဆုံမျောက်နှင့်လူ့လေ့လာမှုများ phasic dopamine ဆုလာဘ်များမမျှော်လင့်ဘဲမရှိခြင်းမျှော်လင့်မထားတဲ့ဆုလာဘ်များနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောခန့်မှန်းအမှားတစ်ခုအပြုသဘောခန့်မှန်းအမှားနှင့်အတူတစ်ဦးခန့်မှန်းအမှား encodes ကြောင်းအကြံပြု (Pessiglione et al ။ , 2006, Schultz, 1998) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ငွေကြေးဆိုင်ရာဆုလာဘ်များမမျှော်လင့်ဘဲမရှိခြင်း ventral-striatal လှုပ်ရှားမှု၌ဤကျဆင်းခြင်း conditional ဦးစားပေးထုတ်ယူစေခြင်းငှါနှစ်ဦးစလုံး၏အလယ်တန်းနှင့်မူလတန်းဆုလာဘ်, အခြေခံအလားတူယန္တရားများအကြံပြုခြင်းတစ်အနုတ်လက္ခဏာခန့်မှန်းအမှားနှင့်ကိုက်ညီနေပေမည်။
ဝတ္ထုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့် dorsal cingulate လေ့အဘို့အ preference
အသစ်အဆန်းရှာဖွေခြင်းနှင့်အာရုံခံစားမှုရှာဖွေခြင်းသည်ဆေးရွက်ကြီး၊ အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းအပါအ ၀ င်အရာဝတ္ထုအမျိုးမျိုးတွင်စွဲလမ်းနေသည့်ရောဂါနှင့်ဆက်စပ်နေသည် (Djamshidian et al ။ , 2011, Kreek et al ။ , 2005, Wills et al ။ , 1994) ။ Preclinical လေ့လာမှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေသည့်အပြုအမူများအတွက်အန္တရာယ်အချက်တစ်ခုအဖြစ်အသစ်အဆန်းကို ဦး စားပေးရခြင်း၏အခန်းကဏ္demonstrateကိုပြသသည် (Beckmann et al ။ , 2011, Belin, Berson, 2011) နှင့်အလားတူစွာပိုမိုမြင့်မားသောအာရုံခံစားမှု - ရှာဖွေခြင်းသည်မြီးကောင်ပေါက်များတွင်နောက်ဆက်တွဲအရက်သောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသည်။ အစားအသောက်မူမမှန်ခြင်း (Conrod, O'Leary-Barrett, 2013) ။ ထိုနည်းတူစွာပါကင်ဆန်၏လူနာများတွင် dopamine agonists အပေါ်လှုံ့ဆော်ထိန်းချုပ်မှုအပြုအမူများတိုးတက်လာခြင်းတွင်အသစ်အဆန်းရှာဖွေခြင်းသည်ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့်လောင်းကစားဝယ်ယူခြင်းကဲ့သို့သောအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ဆက်စပ်သည်။ သို့သော်အရက်သောက်ခြင်းသို့မဟုတ် CSB ကဲ့သို့သောသဘာဝဆုကျေးဇူးများမဟုတ်ပါ (Voon et al ။ , 2011) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိလေ့လာမှုမှာ CSB ဘာသာရပ်များနှင့် HVs အကြားအာရုံ-ရှာကြံရမှတ်များမကွဲပြားမှု, ရှိခဲ့သည် အကျိုးကိုမှတိကျတဲ့အသစ်အဆန်း preference ကိုများအတွက်အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုပေမယ့် novelty- သို့မဟုတ်အာရုံ-ရှာယေဘူယျမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်အလားအလာအသစ်အဆန်းတစ်ခုအဆုံးမဲ့အရင်းအမြစ်ထောက်ပံ့ပေးသောအွန်လိုင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာလှုံ့ဆော်မှုများ၏အခြေအနေတွင်အတွက်အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်စေခြင်းငှါ, အမှန်ပင်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအသစ်အဆန်းတစ်ခုပြဿနာများ၏လျော့နည်းစေခြင်းငှါအရာအတွက်မူးယစ်ဆေးစွဲကှာခွားနိုငျသညျ။
ကျနော်တို့နောက်ထပ် CSB ဘာသာရပ်များငွေကြေးဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှဆွေမျိုးထပ်ခါတလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေဖို့ dACC ပိုမိုလျင်မြန်လေ့ရှိခဲ့ကြောင်းပြသပါ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်ကျန်းမာအထီးစေတနာ့ဝန်ထမ်း (Kuhn နှင့် Gallinat, 2014) တွင်အွန်လိုင်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပစ္စည်းများအလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းမှ putaminal လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွား၏လေ့လာရေးအလားတူရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအွန်လိုင်းလှုံ့ဆော်မှုမှထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်။ အားလုံးဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီး, ထပ်ခါတလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေဖို့အသစ်အဆန်း preference ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များမှ dACC လှုပ်ရှားမှု၏ကြီးမြတ်သောလေ့တို့ကခန့်မှန်းခဲ့သည်။ ကျနော်တို့မကြာသေးမီကရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဗွီဒီယိုများ (Voon, မှဲ့, 2014) မှ CSB ဘာသာရပ်များအတွက်တိုးမြှင့် dACC လှုပ်ရှားမှုပြကြသဖြင့်, dACC နှစ်ဦးစလုံးဆေး cue reactivity ကို်ပတ်သက်နေနှင့် (Kuhn နှင့် Gallinat, 2011) စွဲလမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီယခင်လေ့လာမှုများတွင်ဗီဒီယိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့အေးစက်တွေကိုအဖွစျဆောငျရှကျခဲ့ကြပေမည်နှင့်ကွာခဏပြသခဲ့ကြသည်များနှင့်ဤအရပ်မှသူတို့လေ့နဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိခဲ့ကြပေမည်။ လေ့လည်းအထူးအကဲဖြတ်မခံခဲ့ရပါဘူး။ အဆိုပါ dACC midbrain dopaminergic အာရုံခံကနေကျယ်ပြန့်စီမံချက်များအားလက်ခံတွေ့ဆုံနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအရေးယူရွေးချယ်ရေးမှမျိုးစုံ cortical ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူကောင်းစွာ-ဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီနေသည်။ အဆိုပါ dACC စဉ်ဆက်မပြတ်အပြုအမူလိုက်လျောညီထွေ (Sheth et al ။ , 2012) စဉ်အတွင်းအဓိကဖြစ်ရပ်များမှသင့်လျော်သောအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုဖော်ထုတ်မယ်နှင့်စီစဉ်အတွက်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်, အ dACC လည်းဆုလာဘ်-လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေ, အနာဂတ်ဆုလာဘ်များနှင့်ဆုလာဘ်-ခန့်မှန်းမှားယွင်းမှုများနှင့် ပတ်သက်. အထူးသဖြင့်ခန့်မှန်း (ဘုရှ် et al ။ , 2002, Rushworth နှင့်ဘီရန်း, 2008) တွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်။ ထို့ကြောင့် dACC ၏အခန်းကဏ္ဍကို salience သို့မဟုတ်မမျှော်လင့်ဘဲဆုလာဘ်၏ဆိုးကျိုးများနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ပါသည်။
အသစ်အဆန်း၏အကဲဖြတ်တစ်ဦး polysynaptic hippocampal- (ventral striatal) ကကမကထပြုခဲ့သိမ်းဆည်းထားမှတ်ဉာဏ်နှင့်အတူဝင်လာသောအချက်အလက်များ၏နှိုင်းယှဉ်ကပါဝငျ - (ventral tegmental ဧရိယာ) ကွင်းဆက်အသစ်အဆန်း, salience နှင့်ရည်မှန်းချက်များ (Lisman နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2005) ရက်နေ့တွင်သတင်းအချက်အလက်ပေါင်းစပ်ဖို့အကြံပြုတယ်။ dACC လှုပ်ရှားမှုအတွင်းလျော့နည်းသွားပေမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များမှထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုနှင့်အတူ CSB ဘာသာရပ်များအတွက်တိုးမြှင့် dACC- (ventral striatal) -hippocampal ဆက်သွယ်မှု၏ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာရေးထပ်ခါတလဲလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်မှ hippocampal-မှီခိုမှတ်ဉာဏ်၏ထစ်အငေါ့ encoding ကပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ကွန်ယက်ကိုကိုယ်စားပြုလိမ့်မည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုအရေးကြီးသောအားသာချက်ရှိပါတယ်။ ဒါကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကဤလုပ်ငန်းစဉ်၏အမူအကျင့်များနှင့်အာရုံကြောဆက်စပ်၏တိကျသောရှုထောင့်သို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုခွင့်ပြုအတူ CSB အတွက်အသစ်အဆန်းများနှင့် cue-အေးစက်ဖြစ်စဉ်များများ၏အာရုံကြောကျောထောက်နောက်ခံသို့ပထမဦးဆုံးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ CSB ယောက်ျားအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့အသစ်အဆန်း-ရှာ, အေးစက်နှင့်လေ့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကြောင်းဆေးပညာရှုလေ့လာဖြစ်ပါတယ်စမ်းသပ်မှုတွေအဘယ်အရာကိုပြသပါ။ သို့သော်အချို့န့်အသတ်လည်းအသိအမှတ်ပြုရပါမည်။ ပထမဦးစွာလေ့လာမှုတစ်ခုတည်းကိုသာငယ်ရွယ်လိင်ကွဲယောက်ျားပါဝင်ပတ်သက်။ ဒီ feature သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်တစ်ဦးအစှမျးသတ်တိအဖြစ်မြင်နိုင်ပါသည်သော်လည်းအခြားလိင်စိတ်ခံယူမှုနဲ့နှင့်အတူအမျိုးသမီးများ, အခြားအအသက်အရွယ်အုပ်စုများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီမှ generalization မှလေးစားမှုနဲ့န့်အသတ်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒုတိယအချက်မှာ CSB သင်တန်းသားများကိုယေဘုယျအားဖြင့်ပို, စိုးရိမျစိတျဓာတျမြားနှငျ့ထကြွလွယ်သောခဲ့ကြသည်နှင့်ပိုပြီး obsessive-compulsive features တွေတစ်လမ်းကြောင်းသစ်ပြသခဲ့သည်။ ငါတို့သည်ငါတို့၏ရလဒ်များကိုတွင်ဤ variable တွေကိုတစ်ဦးကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မတှေ့ပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုသူတို့တွေ့ရှိချက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်ခြေဖယ်ထုတ်လို့မရပါဘူး။ တတိယအချက်အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာအေးစက်၏ပုံရိပ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအတွက်ကွဲပြားမှု, မျိုးသုဉ်းတွေကို, မျိုးသုဉ်းရလဒ်ကိုရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံရိပ်တွေ့ရှိချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်အဆန်း၏အမူအကျင့်ဖြစ်စဉ်များကိုထောကျပံ့ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အေးစက်ဦးစားပေး၏တွေ့ရှိချက်ကိုထောကျပံ့ဖို့ပုံရိပ်တွေ့ရှိချက်စောငျ့ရှောကျခဲ့ပါဘူး။ ပိုကြီးတဲ့နမူနာပိုပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပုံများ, သို့မဟုတ်နောက်ဆက်တွဲစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အတူစုစည်းလွယ်ကူချောမွေ့ကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကို generate စေခြင်းငှါအနာဂတ်လေ့လာမှုများအဘို့အအရေးကြီးသောထည့်သွင်းစဉ်းစားကိုယ်စားပြုသည်။ စတုတ္ထ, ဒီလေ့လာမှုခေါ်ဆောင်သွားထက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်ကိုရိပ်မိနိုင်ပုံရိပ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများ အသုံးပြု. ထပ်မံလေ့လာမှုများငွေကြေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှအေးစက်သက်ရောက်မှုများအကြားခွဲခြားလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသစ်အဆန်းများနှင့် dACC လေ့ပါဝင်သော CSB ဘာသာရပ်များအတွက်ဆုလာဘ်မှအေးစက်တစ် generalized တိုးမြှင့်များအတွက်မြှင့်တင်ရန် preference ကို၏အခန်းကဏ္ဍကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် CSB ဘာသာရပ်များအတွက် dACC ပါဝင်သောကွန်ယက်အတွက် သာ. ကြီးမြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue reactivity ကို, ventral striatum နှင့် amygdala (Voon, မှဲ့, 2014) ရှိသည်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို (Mechelmans, Irvine, 2014) ကိုအာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုတိုးမြှင့်သောငါတို့မကြာသေးမီကလေ့လာတွေ့ရှိချက်ကိုတိုးချဲ့ပါ။ ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုများအတွက်မြှင့်တင်ရန်အစောပိုင်းအာရုံကိုဘက်လိုက်မှု၏ဤလေ့လာရေးအခြေခံအသစ်အဆန်း preference ကိုထံမှ cue-အေးစက် dissociable များအတွက်အခန်းကဏ္ဍအလေးပေး။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်အင်တာနက်ကိုအထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းမှလေးစားမှုနှင့်အတူ, ဝတ္ထုနှင့်အလားအလာအကြိုးလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုကျယ်ပြန့်အရင်းအမြစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးအဖြစ်အလားအလာပိုမိုကျယ်ပြန်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများအရာလက်ရှိတွေ့ရှိချက်နှစ်ခုလုံး Cross-Section နှင့်အလားအလာ, CSB နှင့်ဆက်စပ်သောဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာအစီအမံဆက်စပ်လိမ့်မယ်မှအတိုင်းအတာဆနျးစစျသငျ့သညျ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် CSB ၏ကုထုံးစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် dissociable သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များပစ်မှတ်ထားများအတွက်အခန်းကဏ္ဍအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ပဋိသန္ဓေနှင့်စမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်း: VV ။ PB, SM နှင့် VV: အစမ်းသပ်ချက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: PB, LSM, SM, VV ။ PB, nah, MNP နှင့် VV: စက္ကူရေးသားခဲ့သည်။
PB သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာများအတွက်ပေါ်တူဂီဖောင်ဒေးရှင်း (: SFRH / bd / 33889 / 2009 တစ်ဦးချင်းမိတ်သဟာယဖွဲ့) ကထောက်ခံသည်။ ဒေါက်တာ Voon တစ် Wellcome Trust မှအလယ်အလတ် Fellow နှင့်လေ့လာမှု Wellcome Trust မှ (WT093705 / Z ကို / 10 / Z ကို) ကငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်။ channel4ကအင်တာနက်ဆိုဒ်များပေါ်တွင်လေ့လာမှုအဘို့အကျင့်ဝတ်-အတည်ပြုကြော်ငြာအားမရသဖြင့်စုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူကူညီများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကြော်ငြာများကိုစိတ်ဝင်စားသင်တန်းသားများကိုများအတွက်လေ့လာမှုသုတေသနအဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကိုဖြစ်သည်။
အဆိုပါပစ္စည်း, မူရင်းသုတေသနလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်ယခင်ကထုတ်ဝေနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေနှင့်အခြားနေရာများတွင်ထုတ်ဝေရန်တင်သွင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ စာရေးဆရာများ PB, LM, SM, နယူးဟမ်းရှား, MNP နှင့် VV အဘယ်သူမျှမယှဉ်ပြိုင်ဘဏ္ဍာရေးအကျိုးစီးပွားများကိုဘော်ပြရမည်။
ကျနော်တို့ Wolfson ဦးနှောက် Imaging Center မှာလေ့လာမှုနှင့်ဝန်ထမ်းများအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူသောသူအပေါင်းတို့သည်သင်တန်းသားများကိုကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ငါတို့သည်လည်းရန်ပုံငွေများအတွက်စုဆောင်းမှုနှင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာများအတွက်ပေါ်တူဂီဖောင်ဒေးရှင်းမှနှင့် Wellcome Trust မှအတူကူညီမှုအတွက် Channel ကို4အသိအမှတျပွု။
Bardo, MT, Donohew, RL နှင့် Harrington, Ng အသစ်အဆန်းရှာနှင့်အပြုအမူရှာကြံမူးယစ်ဆေးဝါး၏ Psychobiology ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 1996; 77: 23-43
Beck, AT, ရပ်ကွက်, CH, Mendelson, အမ်, ကဲ့ရဲ့, ဂျေနှင့် Erbaugh, ဂျေ စိတ်ကျရောဂါတိုင်းတာခြင်းများအတွက်စာရင်း။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1961; 4: 561-571
Beckmann, JS, Marusich, ဂျာ Gipson, CD ကိုနှင့် Bardo, MT အသစ်အဆန်းရှာ, မက်လုံးပေး salience နှင့်ကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးဝယ်ယူ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2011; 216: 159-165
ဘီးလင်း, ဃ, Berson, N. , Balado, အီး, Piazza, PV နှင့် Deroche-Gamonet, V. high-အသစ်အဆန်း-preference ကိုကြွက်များကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး compulsive မှ predisposed နေကြသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2011; 36: 569-579
ဘီးလင်း, ဃနှင့် Deroche-Gamonet, V. ကိုကင်းစွဲဖို့အသစ်အဆန်းများနှင့်အားနည်းချက်မှတုံ့ပြန်ချက်: multi-လက်ခဏာတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ၏အလှူငွေ။ အေးနွေ Harb ရှုထောင့် Med ။ 2012; 2
Bunzeck, N. နှင့် Duzel, အီး လူ့ substantia nigra / VTA အတွက်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအသစ်အဆန်း၏အကြွင်းမဲ့အာဏာနိုင်တဲ့ coding ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2006; 51: 369-379
Bunzeck, N. , Guitart-Masip, အမ်, Dolan, RJ နှင့် Duzel, အီး လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာပစ္စည်းအသစ်အဆန်းတုံ့ပြန်ချက်၏ Pharmacological Dissociation ။ Cereb Cortex ။ 2013;
ဘုရှ်, G. အ, Vogt, BA, Holmes, ဂျေ, Dale, Am, Greve, ဃ, Jenike, MA et al ။ ဆုလာဘ်-based ဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်အခန်းကဏ္ဍ: anterior cingulate cortex Dorsal ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2002; 99: 523-528
Carnes P ကို, Delmonico DL, အ Net က၏အရိပ်၌ Griffin အီး: compulsive အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကနေအခမဲ့ Breaking ။ ed 2nd ။ Center ကိုစီးတီး, မင်နီဆိုတာ: Hazelden 2001 ။
Childress, AR, Hole, AV, Ehrman, RN, Robbins, SJ, McLellan, AT, နှင့် O'Brien, CP မူးယစ်ဆေးမှီခိုအတွက် Cue reactivity ကိုနှင့် cue reactivity ကိုကြားဝင်။ NIDA သုတေသန monograph ။ 1993; 137: 73-95
Conrod, PJ, O'Leary-Barrett, M. , Newton, N. , Topper, L. , Castellanos-Ryan, N. , Mackie, C. et al ။ ဆယ်ကျော်သက်အရက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားလုပ်များအတွက်ရွေးချယ်, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး-ပစ်မှတ်ထားကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်၏ထိရောက်မှု: တစ်စပျစ်သီးပြွတ်ထိန်းချုပ်ထားရုံးတင်စစ်ဆေး randomized ။ ဂျေအေအမ်အေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2013; 70: 334-342
ကော့, WM, Fadardi, JS နှင့် Pothos, EM အဆိုပါစွဲ-stroop စမ်းသပ်: သီအိုရီထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအကြံပြုချက်များ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာစောင်။ 2006; 132: 443-476
ဂျမ်းရှီဒန်၊ အေ၊ အိုဆလီဗန်၊ အက်စ်အက်စ်၊ ဝစ်တမန်း၊ ဘီစီ၊ လီစ်၊ အေဂျေနှင့်အေဗာဘက်၊ ပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက်အသစ်အဆန်းရှာဖွေခြင်း Neuropsychologia ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ 2011: 49-2483
Ersche, KD, Bullmore, ET, Craig, KJ, Shabbir, အက်စ်အက်စ်, အာဘော့, အက်စ်, Muller, U. et al ။ လှုံ့ဆော်မှီခိုအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၏ dopaminergic မော်ဂျူအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှု compulsive ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010; 67: 632-644
Fiorino, DF နှင့် Phillips က, AG က D-စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်းပြီးနောက်အထီးကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်မြှင့်တင်ရန် dopamine efflux ၏နည်းပြ။ J ကို neuroscience ။ 1999; 19: 456-463
Frohmader, KS, Lehman, MN, Laviolette, SR နှင့် Coolen, LM စိတ်ကြွဆေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှတစ်ပြိုင်တည်းထိတွေ့မှုနောက်ဆက်တွဲမူးယစ်ဆုလာဘ်ပိုကောင်းစေပါတယ်နှင့်အထီးကြွက်များတွင်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ J ကို neuroscience ။ 2011; 31: 16473-16482
Grant က, je, Atmaca, အမ်, Fineberg, NA, Fontenelle, LF, Matsunaga, အိပ်ချ်, Janardhan Reddy, YC et al ။ Impulse Control Disorders နှင့် ICD-11 ရှိ“ အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှု” ။ ကမ္ဘာ့စိတ်ရောဂါကုသမှု။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ 2014: 13-125
Grant က, je, Levine, အယ်လ်, Kim က, ဃ, နှင့် Potenza, MN အရွယ်ရောက်ပြီးသူစိတ်ရောဂါအတွင်းလူနာအတွက် Impulse ထိန်းချုပ်မှုပုံမမှန်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 162: 2184-2188
Jansen, အေ မူးရူးစားတဲ့သင်ယူမှုမော်ဒယ်: cue reactivity ကိုနှင့် cue ထိတွေ့မှု။ Res Ther ပြုမူနေ။ 1998; 36: 257-272
Kafka, အမတ် Hypersexual ရောဂါ: DSM-V ကိုများအတွက်အဆိုပြုရောဂါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ 2010; 39: 377-400
Kagerer, အက်စ်, Wehrum, အက်စ်, Klucken, တီ, ဝေါလ်တာ, ခ, Vaitl, ဃ, နှင့် Stark, R. လိင်ဆွဲဆောင်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ PloS တဦးတည်း။ 2014; 9: e107795
Klucken, တီ, Schweckendiek, ဂျေ, Merz, CJ, Tabbert, K. , ဝေါလ်တာ BAtSGSoNRTVSS, Kagerer, အက်စ် et al ။ conditional လိင်စိတ်နိုးထများ၏ဝယ်ယူများ၏အာရုံကြောလုပ်ဆောင်ချက်: အရေးပေါ်အသိအမြင်နှင့်လိင်၏ဆိုးကျိုးများ။ J ကိုလိင် Med ။ 2009; 6: 3071-3085
Knight ဟာ, R. အသစ်အဆန်းထောက်လှမ်းဖို့လူ့ hippocampal ဒေသ၏ပံ့ပိုးမှုများ။ သဘာဝ။ 1996; 383: 256-259
Koukounas, အီးနဲ့ကျော်, R. လိင်စိတ်နိုးထ၏လေ့စဉ်အတွင်း eyeblink ထိတ်လန့်တုန့်ပြန်၏ပြင်းအားအတွက်အပြောင်းအလဲများ။ Res Ther ပြုမူနေ။ 2000; 38: 573-584
Kreek, MJ, Nielsen, DA, Butelman, ER နှင့် LaForge, KS မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲဖို့ Impulse, အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ, စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်အားနည်းချက်အပေါ်မျိုးရိုးဗီဇလွှမ်းမိုးမှု။ နတ် neuroscience ။ 2005; 8: 1450-1457
Kuhn, အက်စ်နှင့် Gallinat, ဂျေ တရားဝင်နှင့်တရားမ ၀ င်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုတွန်းအားပေးမှု၏ဇီဝဗေဒ - cue-reactivity brain response ကိုအရေအတွက် meta-analysis ။ Eur J ကို Neurosci ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ 2011: 33-1318
Kuhn, အက်စ်နှင့် Gallinat, ဂျေ ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်အတူ Functional ဆက်သွယ်မှု Associated: Porn အပေါ်ဦးနှောက်။ ဂျေအေအမ်အေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2014;
Lisman, je နှင့်တော်ကကျေးဇူး, AA ကို အဆိုပါ hippocampal-VTA ကွင်းဆက်: ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်သို့အချက်အလက်များ၏ entry ကိုထိန်းချုပ်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 46: 703-713
Mazur je ။ သင်ယူခြင်းနှင့်အပြုအမူ။ 5th ed ။ အထက်ကုန်းနှီးမြစ်, NJ: Prentice ခန်းမ; 2002 ။
Mechelmans, DJ သမား, Irvine, အမ်, BANCA, P. , Porter, အယ်လ်, Mitchell က, အက်စ်, မှဲ့, တီဘီ et al ။ နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုဦးတည် Enhanced အာရုံကိုဘက်လိုက်မှု။ PloS တဦးတည်း။ 2014; 9: e105476
Meerkerk, GJ, ဗန် Den Eijnden, RJ နှင့် Garretsen, HF အင်တာနက်အသုံးပြုရန်ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း - ၎င်းသည်လိင်နှင့်ပတ်သက်သည်။ Cyberpsychol Behav ။ ၂၀၀၆; ၉: ၉၀–၁၀၃
နယ်လ်ဆင် HE ။ အမျိုးသားအရွယ်ရောက်စာဖတ်ခြင်းစမ်းသပ်ခြင်း (NART): စမ်းသပ်ခြင်းလက်စွဲစာအုပ်။ ဝင်ဆာ, ဗြိတိန်: NFER-နယ်လ်ဆင်; 1982 ။
Odlaug, BL နှင့် Grant က, je တစ်ကောလိပ်နမူနာအတွက် Impulse-ထိန်းချုပ်မှုမမှန်: ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမင်နီဆိုတာ Impulse Disorders အင်တာဗျူး (MIDI) မှရလဒ်များကို။ လက်တွေ့ Psychiatry ၏ဂျာနယ်မှမူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုအဖော်။ 2010; 12
Odlaug, BL, တဏှာ, K. , Schreiber, LR, Christenson, G. အ, Derbyshire, K. , Harvanko, အေ et al ။ ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ အမ်း Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2013; 25: 193-200
Pessiglione, အမ်, Seymour, ခ, Flandin, G. အ, Dolan, RJ နှင့် Frith, CD ကို Dopamine-မှီခိုခန့်မှန်းအမှားအယွင်းများလူသားတွေအတွက်ဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူများကိုအထောက်အကူပြု။ သဘာဝ။ 2006; 442: 1042-1045
Pfaus, JG, Kippin, TE နှင့် Centeno, S. အေးစက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ ဟော်မုန်းနှင့်အပြုအမူ။ 2001; 40: 291-321
Prause, N. , Janssen, အီးများနှင့် Hetrick, WP အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမှ၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးစိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ 2008; 37: 934-949
Ranganath, C တို့နှင့် Rainer, G. အ ဝတ္ထုဖြစ်ရပ်များဖော်ထုတ်မယ်နှင့်သတိရဘို့အာရုံကြောယန္တရားများ။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံသုံးသပ်ပြီး။ 2003; 4: 193-202
Redolat, R. , ဖာရ-Martinez, အေ, Carrasco, MC နှင့် Mesa, P. အသစ်အဆန်း-ရှာခြင်းနှင့်နီကိုတင်းဖို့အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုအတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု: တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများ၏သုံးသပ်ချက်။ Curr မူးယစ်ဆေးဗျာ 2009 အလွဲသုံးစားပြုမှု; 2: 230-242
ရိဒ်, RC, လက်သမား, BN, Hook, ဖြစ်မှု, Garo, အက်စ်, Manning, JC, Gilliland, R. et al ။ hypersexual ရောဂါများအတွက် DSM-5 လယ်ကိုရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်တွေ့ရှိချက်အစီရင်ခံစာ။ J ကိုလိင် Med ။ 2012; 9: 2868-2877
Rushworth, MF နှင့်ဘီရန်း, TE prefrontal နှင့် cingulate cortex အတွက်ရှေးခယျြမှု, မရေရာနှင့်တန်ဖိုး။ နတ် neuroscience ။ 2008; 11: 389-397
Rushworth, MF, လမ်းပြ Noonan, အမတ်, Boorman, ED, ဝေါ်လ်တန်, ME နှင့်ဘီရန်း, TE တိုကျရိုကျ cortex နဲ့ဆုလာဘ်-guided သင်ယူမှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2011; 70: 1054-1069
de la Fuentes, JR, နှင့် M, G. အ Saunders, JB, Aasland, ဩဃ, Babor, TF, အန္တရာယ်အရက်စားသုံးမှု-II ကိုအတူ Persons ၏အစောပိုင်းထောက်လှမ်းခြင်းအပေါ် WHO ကပူးပေါင်းစီမံကိန်း: အရက်အသုံးပြုမှု Disorders သတ်မှတ်ခြင်းစမ်းသပ်ခြင်း (စာရင်းစစ်) ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ စွဲလမ်း။ 1993; 88: 791-804
Schultz, ဒဗလျူ dopamine အာရုံခံ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဆုလာဘ် signal ကို။ J ကို Neurophysiol ။ 1998; 80: 1-27
Schultz, ဒဗလျူဒါယန်း, P. နှင့်ဂူ, PR စနစ် ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်တစ်ခုအာရုံကြောအလွှာဟာ။ သိပ္ပံ။ 1997; 275: 1593-1599
Sescousse, G. အ, Barbalat, G. အ, Domenech, P. နှင့် Dreher, JC ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းအတွက်ဆုလာဘ်အမျိုးမျိုးဖို့ sensitivity ကိုအတွက်မညီမမျှ။ ဦးနှောက်။ 2013; 136: 2527-2538
Sheehan, DV, Lecrubier, Y. , Sheehan, KH, Amorim, P. , Janavs, ဂျေ, Weiller, အီး et al ။ Mini-အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါအင်တာဗျူး (MINI): DSM-IV နှင့် ICD-10 များအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံမှာအဖြေရှာတဲ့စိတ်ရောဂါအင်တာဗျူး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် validation ကို။ J ကို Clin စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998; 59: 22-33 (ပဟေဠိ 4-57)
Sheth, SA, Mian အဘိဓါန်, MK, Patel က SR, Asaad, WF, ဝီလျံ, ZM, Dougherty, DD et al ။ လူ့ dorsal anterior cingulate cortex အာရုံခံဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအပြုအမူလိုက်လျောညီထွေဖျန်ဖြေ။ သဘာဝ။ 2012; 488: 218-221
Spielberg CD ကို, Gorsuch RL, Lushene R ကို, PR စနစ် V ကို, Jacobs GA ။ နိုင်ငံတော်-စရိုက်များတော့ပူပန် Inventory များအတွက်လက်စွဲစာအုပ်။ Palo Alto:, CA: စိတျပညာစာနယ်ဇင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း .; 1983 ။
Toates, အက်ဖ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု, arousal နှင့်အပြုအမူကိုနားလည်ဘို့ an Integrated သီအိုရီမူဘောင်။ J ကိုလိင် Res ။ 2009; 46: 168-193
Toussaint, ဗြဲနှင့် Pitchot, ဒဗလျူ Hypersexual ရောဂါကို DSM V ကိုတွင်ထည့်သွင်းမည်မဟုတ်ပါ: တစ် Contextual ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဗြာ Med Liege ။ 2013; 68: 348-353
ဂျုံ, PJ, Oldehinkel, AJ နှင့် Ostafin, bd က de ဗန် Hemel-Ruiter, ME, ဆုလာဘ်-related အာရုံကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း: အ Trail လေ့လာမှု။ Psychol စွဲပြုမူနေ။ 2013; 27: 142-150
Voon, V. , မှဲ့, တီဘီ, BANCA, P. , Porter, အယ်လ်, မောရစ်, အယ်လ်, Mitchell က, အက်စ် et al ။ အာရုံကြောနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ cue reactivity ကို၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ PloS တဦးတည်း။ 2014; 9: e102419
Voon, V. , Sohr, အမ်, Lang, AE, Potenza, MN, Siderowf, အေဒီ, Whetteckey, ဂျေ et al ။ ပါကင်ရောဂါအတွက် Impulse ထိန်းချုပ်မှုမမှန်: တစ်ပေါင်းစုံပါအမှုထိန်းချုပ်ရေးလေ့လာမှု။ အမ်း Neurol ။ 2011; 69: 986-996
Wehrum, အက်စ်, Klucken, တီ, Kagerer, အက်စ်, ဝေါလ်တာ, ခ, Hermann, အေ, Vaitl, ဃ et al ။ ကျားဆင်တူရိုးမှားနှင့်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏အာရုံကြောအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှု။ J ကိုလိင် Med ။ 2013; 10: 1328-1342
Wehrum-Osinsky, အက်စ်, Klucken, တီ, Kagerer, အက်စ်, ဝေါလ်တာ, ခ, Hermann, အေနှင့် Stark, R. အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဆီသို့အာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုများ၏တည်ငြိမ်မှု: ဒုတိယတစ်ချက်မှာ။ J ကိုလိင် Med ။ 2014; 11: 2720-2737
Whiteside, SP နှင့် Lynam, DR ငါးအချက်မော်ဒယ်နှင့် Impulse: Impulse ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတစ်ခုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမော်ဒယ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ။ 2001; 30: 669-689
Wiers, RW, Eberl, C တို့, Rinck, အမ်, Becker က, ES နှင့် Lindenmeyer, ဂျေ အလိုအလျောက်လှုပ်ရှားမှုလမ်းကြောင်းကိုပြန်လည်လေ့ကျင့်ပေးခြင်းသည်အရက်နှင့်ပတ်သက်သောလူနာများ၏ဘက်လိုက်မှုကိုပြောင်းလဲပေးပြီးကုသမှုရလဒ်ကိုတိုးတက်စေသည်။ စိတ်ပညာသိပ္ပံ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ 2011: 22-490
ဝီလျံ, SM နှင့် Goldman-Rakic, PS အဆိုပါမျောက် mesofrontal dopamine စနစ်၏ကျယ်ပြန့်ဇာစ်မြစ်။ Cereb Cortex ။ 1998; 8: 321-345
မည်, TA, Vaccaro, ဃ, နှင့် McNamara, G. အ ဆယ်ကျော်သက်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းသူအဖြစ်အသစ်အဆန်းရှာဖွေခြင်း၊ စွန့်စားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ - Cloninger ၏သီအိုရီကိုအသုံးပြုခြင်း။ J Subst အလွဲသုံးစားမှု။ 1994; ၆: ၁-၂၀
Yiend, ဂျေ အာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ဆိုးကျိုးများ: စိတ်ခံစားမှုအချက်အလက်များ၏အာရုံကိုအပြောင်းအလဲနဲ့၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ သိမှတ်ခံစားမှုနှင့် Emotion ။ 2010; 24: 3-47
compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အင်တာနက် (ဘီဘီစီရေဒီယို 4)